ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပုံရိပ်မျိုးဗီဇ - dopamine လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အပြုအမူနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း (၂၀၁၄) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပုံရိပ်မျိုးရိုးဗီဇ: ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူမှ dopamine function ကိုချိတ်ဆက် (2014)
ဦးနှောက် Cogn ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2015 သြဂုတ် 1 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
ဦးနှောက် Cogn ။ 2014 သြဂုတ်; 89: 27-38 ။
2013 အောက်တိုဘာ 17 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.bandc.2013.09.011
Aarthi Padmanabhan1 နှင့် Beatriz Luna1
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် ဦးနှောက် Cogn
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုသိသိသာသာအပြုအမူများနှင့်ဦးနှောက် function ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းမြောက်မြားစွာ neurobiological ပြောင်းလဲမှုများကိုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ကာလဖြစ်ပါတယ်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကြောင့်ကြောင်းသေဆုံးမှုနှုန်းအကြီးအကျယ်ရှာကြံတိုးလာ Impulse နှင့်အာရုံခံစားမှုကနေရရှိလာတဲ့အန္တရာယ်-ယူပြီးအပြုအမူတွေအတွက်အထွတ်အထိပ်ကြောင့်ကလေးဘဝမှနှိုင်းယှဉ်လျှင်ဤအချိန်ကာလအတွင်းနှစ်ခုမှသုံးခု-ခြံတိုးမြှင့်ညွှန်ပြသည့်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာစာရင်းဇယားအထူးစိတျဝငျစားဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပွငျအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဇီဝအချက်များကကမကထပြုခဲ့ကြသည်ဤအပြုအမူအတွက်ကြီးမားသော unexplained အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲရှိနေပါသည်။ မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging တွင်လတ်တလောတိုးတက်မှုတွေ noninvasively လူသားတွေအတွက်ဦးနှောက် function ကိုအပေါ်မျိုးရိုးဗီဇအချက်များ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလေ့လာဖို့ထူးခြားတဲ့နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အခွင့်အလမ်းပေးပါပြီ။ မျိုးဗီဇသတ်သတ်မှတ်မှတ်အပြုအမူများအတွက် code ပါဘူးနေစဉ်, သူတို့အပြုအမူအခြေခံသောအာရုံခံဖြစ်စဉ်များတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်းပရိုတိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လုပ်ပါ။ ရှုပ်ထွေးသောအပြုအမူတွေအတွက်ဇီဝကမကထပြုခဲ့တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုပေါ်ထွက်လာသည့်အခါထိုကွောငျ့, ဖှံ့ဖွိုးတိုးကျော်ဦးနှောက် function ကို၏အစီအမံတွေနဲ့ genotype များ၏အပြန်အလှန်လေ့လာသင်ယူအရေးပါသောအချိန်အချက်များအပေါ်အလင်းကိုသွန်းနိုင်ဘူး။ ဤတွင်ကျနော်တို့ dopamine neurotransmission နှင့်ဆက်စပ်သောဆယ်ကျော်သက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ neurobiological အခြေခံဆန်းစစ်တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့စာပေပြန်လည်သုံးသပ်။ Dopamine ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သိမြင်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအပြုအမူတွေအတွက် (1) က၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍ, (2) က၎င်း၏အဓိက psychopathology ၏ pathogenesis အတွက်အခန်းကဏ္ဍနှင့် (3) ၏အရေးပါသောအရေးပါမှု၏မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုကျော် dopamine အချက်ပြလမ်းကြောင်း၏ကာလကြာရှည်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ထို့နောက်ဦးနှောက် function ကိုအပေါ် dopamine-related မျိုးဗီဇ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆန်းစစ်လက်ရှိသုတေသနအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့စိတ်ထဲ၌ဤချဉ်းကပ်မှု၏ကန့်သတ်မှုကိုစောင့်ရှောက်, ပုံရိပ်မျိုးဗီဇ၏အသုံးပြုမှုကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက် function ကိုအပေါ်မျိုးရိုးဗီဇကမကထပြုခဲ့ dopamine အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆနျးစစျဖို့တင်ပြသည်။
key ကို neuroendocrine ဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်လျက်, သိသာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ, neurochemical, neurofunctional, ဇီဝကမ္မ, နှလုံးသွေးကြောနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရငျ့အပါအဝင်ဇီဝပြောင်းလဲမှုတစ်ခုရှုပ်ထွေးပြီးစီးရီးနဲ့အတူပူးတွဲဖြစ်ပေါ်သည့်အခါလူ့သက်တမ်းမှာဆယ်ကျော်သက်ကာလအကြမ်းဖျင်း, အပျိုဖော်ဝင်စတင်ခြင်းနှင့်အတူတိုက်ဆိုင် (Falkner နှင့်သားရေလုပ်သမား 1986; Romeo 2003) ။ ဤရွေ့ကားဇီဝအပြောင်းအလဲများကိုအပြန်အလှန် (ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူအပြန်အလှန်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦးအားနည်းချက်နှင့်ပြောင်းလဲနေသောကာလသွင်ပြင်လက္ခဏာများလှံ, 2000) ။ မျိုးစိတ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုဖြတ်ပြီး, အန္တရာယ်ရှောင်ရှားခြင်း၏လျော့နည်းသွားအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူ coupled အာရုံခံစားမှု / အသစ်အဆန်းရှာကြံအတွက်ထိပ်အပါအဝင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဝိသေသအပြုအမူတွေ (အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေအတွက်တိုးမှဦးဆောင်ရှိပါတယ်Laviola, Macri et al ။ 2003) ။ အာရုံခံစားမှု / အသစ်အဆန်းရှာအတွက်စံချိန်စံညွှန်းများတိုးမြှင့်မြီးကောင်ပေါက်အိမ်ပြင်ပတွင်လွတ်လပ်ရေးရှာခွင့်ရသပ္ပါယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်အချို့အန္တရာယ်များလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအခန်းကဏ္ဍသို့အကူးအပြောင်းလွယ်ကူချောမွေ့ရန်လိုအပ်သောဖြစ်လိမ့်မယ်။ သို့သျောလညျးမွငျ့မားပုဂ္ဂလဒိဋ္လိုလားရှိသည်အချို့အပြုအမူတွေကိုလည်း (အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အကျိုးဆက်များမှတစ်ဦးချင်းဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်လှံ, 2000) ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် (စမက်လုံးပေး-မောင်းနှင်အပြုအမူအဖြစ်လူသိများ) အလားအလာအကြိုးရလာဒ်ပေမယ့်မြင့်မားတဲ့အလားအလာအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များနှင့်အတူအပြုအမူအတွက်ပါဝငျအဖြစ်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေသတ်မှတ်။ သေဆုံးမှုနှင့်ရောဂါနှုန်းထားများကလေးဘဝထဲကနေသိသိသာသာတိုးမြှင့်အဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အထွတ်အထိပ် (ဥပမာမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်အတူလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်, မဆင်မခြင်မောင်းနှင်မှုများနှင့်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှု), အံ့သြဖွယ်ဖြစ်နိုင်သောအန္တရာယ်များအပြုအမူတွေ၏အကျိုးဆက်များ (Dahl 2004) ။ စံတန်ဖိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အန္တရာယ်များအပြင်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုမကြာခဏအမျိုးမျိုးသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမကျန်းထိုကဲ့သို့သောစိတ်ဓါတ်များမမှန်, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုမမှန်, မမှန်စားသုံးခြင်းနှင့် psychoses (အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာသည့်အခါအချိန်ဖြစ်ပါသည်ထင်းရှူး 2002; ကုန်သည်များ, တေလာ et al ။ 2003; Sisk နှင့် Zehr 2005; pause, Keshavan et al ။ 2008), အပြည့်အဝစရိုက်လက္ခဏာတွေမဟုတ်သည့်များအတွက်အန္တရာယ်အချက်များ။ ဒီအထောက်အထားများအလငျး၌ပြုလုပ်မြီးကောင်ပေါက်မှတ်သားဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ် (ရင့်ကျက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်pause 2005), စိတ္တဇစဉ်းစားတွေးခေါ်များနှင့်မကြာခဏဆင်ခြင်တုံတရားအပြုအမူထိတွေ့ဆက်ဆံ (Steinberg, Cauffman et al ။ 2009) ။ ထို့ကြောင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိသည့်ဂန္အန္တရာယ်-ယူပြီးအပြုအမူတွေအများအပြားအလွန်အမင်း Emotion နှင့် / သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်-ရှာကြံပြည်နယ်များ (များ၏အခြေအနေတွင်မကြာခဏများမှာကာဇီ, Getz et al ။ 2008; Blakemore နှင့် Robbins 2012), အပြည့်အဝစရိုက်လက္ခဏာတွေမဟုတျကွောငျးထူးခြားတဲ့နှင့်တစ်လောကလုံးဇီဝအားနည်းချက်နှင့် neuroplasticity မီးမောင်းထိုးပြ။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အပြုအမူတွေကိုယူပြီးအန္တရာယ်အတွက်ခြုံငုံတိုး၏သက်သေအထောက်အထားများရှိနေသော်လည်းတစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းအာရုံခံစားမှုနှင့်အသစ်အဆန်းရှာ၌မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အထွတ်အထိပ်မှာသောယူဆချက်နှင့်အတူ unexplained ဖြစ်နေဆဲကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူအတွက်အများကြီးပြောင်းလဲနိုင်သည်ရှိသေး၏။ တချို့ဆယ်ကျော်သက်မြင့်မားသောအန္တရာယ်-takers နေစဉ်, အခြားသူများမဟုတ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အချို့တစ်ဦးချင်းစီစွန့်စားမှု-ဆည်းပူးနေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရသောအောက်ရှိအခင်းအကျင်းကွဲပြားသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်မျိုးဗီဇ၏လယ်ပြင်အပြုအမူအတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲများ၏ neurobiological အခြေခံဆန်းစစ်သိမြင်မှုမှ neuroscience နှင့်အတူပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ '' ပုံရိပ်မျိုးဗီဇ '' အဖြစ်လူသိများဤသည်ချဉ်းကပ်မှု, (ထို genotype မှဦးနှောက် function ကို၏ဆွေမျိုးနီးကပ်ပေးထား, ဦးနှောက် function ကိုနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာဗီဇနှင့်အပြုအမူအကြားအလယ်အလတ် phenotypes အဖြစ်အစေခံနိုငျသောစိတ်ကူးအတွက် grounded ဖြစ်ပါတယ်Hariri နှင့် Weinberger 2003).
ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုသည် neurotransmitter dopamine ၏လွှမ်းမိုးမှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရှိမက်လုံးများ - မောင်းနှင်သည့်အပြုအမူများအပေါ် dopamine ဗီဇပြောင်းလဲမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဦး နှောက်၏အဓိကကျသော ဦး နှောက်စနစ်၏ရင့်ကျက်မှုနှင့်ပတ်သက်သောစာပေများနှင့် Frontostriatal ဆားကစ်များနှင့်သူတို့၏ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အပြုအမူများတွင်သူတို့၏အခန်းကဏ္reviewကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ လှုံ့ဆော်သောအပြုအမူများပြောင်းလဲခြင်းတွင် dopamine ၏အခန်းကဏ္ and နှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှတစ်ဆင့် dopamine လုပ်ဆောင်မှုကိုကြာရှည်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အခန်းကဏ္discussedကိုဆွေးနွေးပါမည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အနာဂတ်သုတေသနများအတွက်အဆိုပြုချက်ကိုမှ ဦး ဆောင် key ကို dopamine အချက်ပြဗီဇအတွက်ဘုံအလုပ်လုပ်တဲ့ polymorphic သုံးပြီးပုံရိပ်မျိုးရိုးဗီဇလေ့လာမှုတစ်ခုပြန်လည်သုံးသပ်အာရုံစိုက်ပါ။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်မက်လုံးပေးမောင်းနှင်အပြုအမူတွေနဲ့ frontostriatal ဆားကစ်
သက်သေအထောက်အထားမြီးကောင်ပေါက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဘို့အရွယ်ရောက် (တွေ့မြင်ထက်ကွဲပြားခြားနားနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်စဉ်ကိုမက်လုံးပေးလေ့ကြောင်းအကြံပြု: Geier နှင့် Luna (2009; Ernst, Daniele et al ။ 2011)), suboptimal နှင့်မကြာခဏအန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ဦးဆောင်။ ဆယ်ကျော်သက်မက်လုံးပေးအပြောင်းအလဲနဲ့၏မူဘောင်မြီးကောင်ပေါက်အလားအလာဆုလာဘ် (ဆီသို့ဦးတည် biased သောစိတ်ကူးပေါ်ကဆက်ပြောပါတယ်ဖြစ်ပါသည်Steinberg 2004) နှင့်နုသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးဖော်ပြရန် (Yurgelun-Todd 2007), နှစ်ဦးစလုံးအခြေခံသောဦးနှောက်စနစ်များအတွက်ဆက်လက်ရငျ့နှင့်အတူ (ကာဇီ, Getz et al ။ 2008; Ernst နှင့် Fudge 2009).
လူ့ striatum မက်လုံးပေးအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အဓိက node ကိုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အပြုအမူရရှိလာတဲ့, အထူးသပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကို synthesize နှင့်သင့်လျော်စွာထပ်၏လမျးဖွငျ့ prefrontal cortex (PFC) နဲ့ပေါင်းစည်းရေးမှတဆင့်အပြုအမူတွေကို update လုပ်ဖို့စွမ်းရည်အတွက်ဒါပေမဲ့ function အသားအရောင်ခွဲခြားလမ်းကြောင်း (ဖြစ်ပါတယ်အလက်ဇန်းဒါး, DeLong et al ။ 1986; Postuma နှင့် Dagher 2006; di Martino, Scheres et al ။ 2008) (ကွဲပြားအပြုအမူတွေကိုအခြေခံဖြစ်ကြောင်းTekin နှင့် Cummings က 2002) ။ တိုကျရိုကျဒေသများထံမှ excitatory စီမံကိန်း၏လမ်းဖြင့်ဗိုလ်မှူးတိုကျရိုကျ-striatal ဆားကစ် function ကိုတိကျတဲ့ striatal ဒေသများသို့ (ဥပမာ dorsolateral PFC, ventromedial caudate မှ caudate, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် OFC dorsal accumbens nucleus မှ OFC medial မှ) နှင့်ပြန် thalamus မှတဆင့်။ ဤရွေ့ကားပိတ်လိုက်-ကွင်းဆက်ဆားကစ်နှစ်ခုအဓိကလမ်းကြောင်းအတွက်ရလဒ်; တိုက်ရိုက်နဲ့သွယ်ဝိုက်။ အဆိုပါ thalamus disinhibits ရသောတိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်း, striatum ထံမှ midbrain ဖို့ thalamus ဖို့ globus pallidus ၏ပြည်တွင်းရေး segment တစ်ခုသို့ GABAergic စီမံချက်များပါဝင်သည်။ အဆိုပါသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း striatum ထံမှ globus pallidus externa ဖို့ thalamus တားစီးသော globus pallidus interna အတွက် subthalamic နျူကလိယ, နောက်ဆုံးတော့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် inhibitory အာရုံခံမှ GABAergic စီမံချက်များပါဝင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်မျက်နှာသာအပြုအမူတွေကိုတိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းကနေတဆင့် activated နေကြသည်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းလျော့နည်းနှစ်လိုဖွယ်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်လုပ်ရပ်များဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ထို့ကြောင့် frontostriatal ဆားကစ်၏ function ကိုအတွက်နုနှင့်အနှောင့်အယှက် suboptimal အပြုအမူတွေကိုမှဦးဆောင်တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းအကြားယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်ပေါ်စေမည်။
ဒီအဆုံး, ဆယ်ကျော်သက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ neurobiological မော်ဒယ်များဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးအလားအလာကြိုးဖိနှိပ်ခြင်း (PFC မောင်းနှင်နေတဲ့နေဆဲဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းသိမြင်မှုစနစ်နှင့်အတူ striatum မောင်းနှင်တစ်ခုကျော်တက်ကြွဆယ်ကျော်သက်မက်လုံးပေးစနစ်,, အကောင်းဆုံးအပြုအမူစည်းမျဉ်းထဲမှာအလုပ်လုပ်တဲ့မညီမမျှဖန်တီးစေခြင်းငှါအကြံပြု မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရှိပေမယ့်မသင့်လျော်အပြုအမူ) ဖြင့်တိုးမြှင့်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေအမူအကျင့် ((နယ်လ်ဆင်, Leibenluft et al ။ 2005; Ernst, ထင်းရူး et al ။ 2006; ကာဇီ, Getz et al ။ 2008), ဤအမော်ဒယ်တစ်ဦးအကျဉ်းချုပ်အဘို့ကိုတွေ့မြင် Sturman နှင့် Moghaddam, (2011)) ။ အမှန်စင်စစ်မက်လုံးပေးအပြောင်းအလဲနဲ့၏အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging လေ့လာမှုများ (လူကြီးဖို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဆွေမျိုးအတွက် differential ကို striatal နှင့် PFC activation ကိုသရုပ်ပြBjork, Knutson et al ။ 2004; Ernst, နယ်လ်ဆင် et al ။ 2005; သွပ်ရည်စိမ်, Hare et al ။ 2006; Bjork, Smith က et al ။ 2010; ဗန် Leijenhorst, Moore et al ။ 2010; Padmanabhan 2011), လေ့လာမှုအများစု prefrontal စုဆောင်းမှုအတွက်လျှောက်လျော့နည်းနှင့်အတူ coupled striatal activation တစ်ခုတိုး, အစီရင်ခံအတူ။ ထို့အပွငျ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုလေ့လာမှုများ, လျှော့ချတာဝန်-ဆီလျှော်ဆက်သွယ်မှုမှဦးဆောင် cortical ဆက်သွယ်မှုမှ subcortical အပါအဝင်ဦးနှောက်ဒေသများ, အကြားပေါင်းစည်းမှုနှင့်ညှိနှိုင်း, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုကျော်ပိုပြီးသန့်စင်ပြီးထိရောက်မှုရှိသောဖြစ်လာကြောင်းရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလုပ်ရပ်တွေကိုထောက်ခံအားပေးဆက်သွယ်မှု၏ခိုင်မာခြင်း, မလိုအပ်တဲ့၏ဖျက်သိမ်းရေးအကြံပြု ဆက်သွယ်မှု (Durston, Davidson et al ။ 2006; Liston, Watts et al ။ 2006; တရားမျှတသော, Cohen ကို et al ။ 2009; Stevens, Pearlson et al ။ 2009; Hwang, Velanova et al ။ 2010) ။ တိရိစ္ဆာန်နဲ့ post-ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာလူ့စာပေ (serotonin, dopamine, adenergic နှင့် endocannabinoids များအတွက် receptors တစ်ခု overexpression အကြံပြုLidow နှင့် Rakic ​​1992interneurons ၏သိပ်သည်းဆမှာ), တစ်ဦးအထွတ်အထိပ် (အန်ဒါဆင်, Classey et al ။ 1995; Lewis က 1997; နိုင်ကြောင်းနှင့် Lewis က 2002), နှင့်ဂါဘမြို့သားများအဆင့်ဆင့်အတွက်တိုး (Hedner, Iversen et al ။ 1984) ။ ဤပြောင်းလဲမှုများလူကြီးသို့အပြောင်းအလဲနဲ့ထိန်းချုပ်ထားမွမ်းမံကြောင်းအာရုံခံအချက်ပြအတွင်း excitatory-inhibitory ချိန်ခွင်လျှာပြောင်းလဲပစ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ subcortical axon, axon caliber အတွက်အပြောင်းအလဲ synapses နှင့် receptors ၏တံစဉ်များကို, ဆဲလ်ကိုကျုံ့နှင့် glial အပြောင်းအလဲများကို (ရန် cortical အတွက် myelination တိုးလာYakovlev နှင့် Lecours 1967; Rakic, Bourgeois et al ။ 1986; ဂိ, လိပ် et al ။ 1994; Andersen က 2003) (ဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်မွမ်းမံခြင်းနှင့်အလွန်အမင်းကိုအသုံးပြုဆက်သွယ်မှုအားကောင်းလာစေရန်နှင့်ခိုင်မာအောင်, ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံများမှတဆင့်မလိုအပ်တဲ့သို့မဟုတ်အားနည်းစွာအသုံးပြုသောဆက်သွယ်မှုအားနည်းသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းရေးစဉ် (Huttenlocher 1990; Jernigan, Trauner et al ။ 1991; Pfefferbaum, Mathalon et al ။ 1994; Giedd, Blumenthal et al ။ 1999), ပြန်လည်သုံးသပ်မြင်ဘို့: (pause 2005)) ။ အတူတူယူ, လက်ရှိစာပေရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အတွက်နုနှင့်အဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံအဆင့်ဆင့်မှာတိုကျရိုကျနှင့် striatal ဒေသများအကြားပေါင်းစည်းမှုတစ်ဦးကွဲပြားဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက် (နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်မူအကျင့်) phenotype အထောက်အကူပြုကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြ။
အကျိုးသက်ရောက်စေ, မှတ်ဉာဏ်နှင့်မော်တာဖြစ်စဉ်များ subserving Frontostriatal ဆားကစ်ကိုသိသိသာသာ neurotransmitter dopamine (DA) က modulated နေကြသည် (ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်မြင်သောကြောင့် (Schultz 2002; ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု 2004; Cool 2008), excitatory DA receptors ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကနေတစ်ဆင့်တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်း၏ပံ့ပိုးမှတဆင့် (ဃ1-like) နှင့် inhibitory DA receptors (ဃ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှတဆင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း၏တားစီး2-like) ။ ထို NACC အတွက်အလတ်စား spiny အာရုံခံမှ midbrain စီမံကိန်းကိုအဖြစ် PFC အတွက်ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံအတွက် DA အာရုံခံ, အားဖြင့်ဤသူအာရုံခံများ၏ပစ်ခတ်မှုနှုန်းပြောင်းလဲပစ်နှင့် striatum နှင့် PFC (အကြားခိုင်မာတဲ့အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးမျိုးထူထောင်ရန်တော်ကကျေးဇူး, Floresco et al ။ 2007) ။ DA အဆင့်ဆင့် (High-လွှဲခွင် phasic လွှတ်ပေးရန်ပစ်ခတ် (1) တစ်ဦးပေါကျကှဲအပြန်အလှန်ကြောင်း DA ဥတုနှစ်ခု dissociable ဖြစ်စဉ်များ, (2) က striatal ဒေသများသို့ cortical ထံမှ DA အာရုံခံခြင်းနှင့် glutamatergic afferents ၏အခြေခံပစ်ခတ်ရန်နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်အဆက်မပြတ်နောက်ခံလုပ်သူများ modulated နှင့်နေကြတယ်တော်ကကျေးဇူး, Floresco et al ။ 2007) ။ DA အချက်ပြ၏နှစ်ပါးယန္တရားများကွဲပြားအပြုအမူတွေဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရန်တွေ့ပါပြီ (Floresco အနောက် et al ။ 2003) နှင့် reuptake နှင့်ပျက်စီးခြင်းအင်ဇိုင်းတွေအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ အစာရှောင်ခြင်း phasic ဖြစ်ရပ်များ (တုံ့ပြန်မှုအတွက်အမှားထောက်လှမ်းဘို့အဖြစ်အရေးကြီးသောသင်ကြားမှုအချက်ပြမှုများကိုအစေခံများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတုံ့ပြန်ပြုမူအပြောင်းအလဲများကို modulate ရသောမှဆုချ-related ဖြစ်ရပ်များ, ဖြစ်ပေါ်Schultz 1998) ။ DA ၏လုပ်သူများအဆင့်ဆင့်အတွက်အနှေးအပြောင်းအလဲများကို (ဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုတုံ့ပြန်ရန်သက်ရှိတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ယန္တရားဖြစ်နိုင်သည်Schultz 1998) ။ လုပ်သူများ DA လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု inhibitory ဖက်ရှင်အတွက် phasic အချက်ပြထိန်းညှိခြင်းနှင့် phasic DA လုပ်သူများလှုပ်ရှားမှုမြှင့်တင်ရန်ပြသထားပြီးတဲ့အတိုင်းဒီစနစ်များလည်း (အပြန်အလှန်ထိုဒေါ် et al ။ 2007).
အဆိုပါ DA system ကိုတော်တော်များများအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူများအတွက်သက်ဆိုင်ရာတည်းဟူသောမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုကျော်သိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှုခြင်းကိုသည်းခံ။ ဒါကြောင့်အားဖြင့် plasticity လွှမ်းမိုး, synapses ၏ခွန်အားလစ်လျူရှုအဖြစ်ပထမဦးစွာ DA အချက်ပြအားဖြည့်သင်ယူမှုထောက်ခံပါတယ်။ ဒုတိယအချက်မှာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ပြောင်းလဲဖြစ်ကြောင်း striatal နှင့် prefrontal function ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်လှုံ့ဆော်အပြုအမူတွေ၏ DA မော်ဂျူ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, DA အချက်ပြအတွက်မူမမှန် (ဥပမာ schizophrenia, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု) မကြာခဏမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ပေါ်ထွက်လာကြောင်းအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်များ၏ pathophysiology ်ပတ်သက်နေနေကြသည်။ DA function ကိုများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူများအတွက်ဂယက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု spanning အဆိုပါစာပေ (တခြားနေရာအတိမ်အနက်အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်လျက်ရှိသည်လှံကို 2000; ကုန်သည်များ, တေလာ et al ။ 2003; O'Donnell 2010; Wahlstrom, Collins et al ။ 2010; Wahlstrom, White, et al ။ 2010; Luciana, Wahlstrom et al ။ 2012) နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအကျဉ်းချုံးထားပါသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် DA system ပေါ်တွင်အထောက်အထားများစွာ Non-လူ့မျောက်နှင့်ကြွက်မော်ဒယ်များနှင့်တွေ့ရှိချက်ကနေရိုးမရှိကြပေ။ စိတ်ထဲ၌ဤအသိပေးချက်နှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာစာပေခေတ္တဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူများအတွက်သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါအနေနဲ့ခြုံငုံလမ်းကြောင်းသစ်ကိုမီးမောင်းထိုးပြဖို့အောက်ကအကျဉ်းချုံးထားပါသည်။
midbrain DA အာရုံခံ၏လှုပ်ရှားမှုထဲမှာတစ်ဦးကအထွတ်အထိပ်ကို (ကြွက်မော်ဒယ်အတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်McCutcheon, White, et al ။ 2009), DA အဆင့်ဆင့်အတွက်ခြုံငုံတိုးအကြံပြုခြင်း။ တခြားလေ့လာမှုလူကြီးတစ်နောက်ဆက်တွဲကျဆင်းမှုနှင့်အတူနှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်လုပ်သူများ DA ပြင်းအားအတွက်အထွတ်အထိပ်မှတ်ချက်ချကြပါပြီ ((Badanich, Adler et al ။ 2006; Philpot, Wecker et al ။ 2009) ။ non-လူ့မျောက်လေ့လာမှုများ (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း DA ၏အမြင့်ဆုံးပြင်းအားလူကြီးအတွက်ကဆင်းကျဆင်းနေခြင်းမပြုမီ PFC ၌နေသောကိုပြသGoldman-Rakic ​​နှင့်ဘရောင်း 1982) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အထိ striatum တိုးလူ့ Post-ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာလေ့လာမှုများ, DA အဆင့်ဆင့်များတွင်ပြီးတော့တူညီတဲ့လျော့သို့မဟုတ်ရှိနေဆဲ (Haycock, Becker က et al ။ 2003) ။ တဦးတည်းလေ့လာမှုမှာ NACC အတွက် DA ၏ extracellular အဆင့်ဆင့် (လူကြီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အနိမ့်ခဲ့ကြCao, Lotfipour et al ။ 2007) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် PFC ထိပ်မှ Dopaminergic innervation (Rosenberg ကနှင့် Lewis က 1995; ဂိ, တေလာ et al ။ 2000), cortical အလွှာ III ကိုခံအကြီးဆုံးတိုး, ထိုမြင့်မားသိမြင်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသောဒေသ (နဲ့အတူLewis ကနှင့် Gonzalez-Burgos 2000) ။ ဤအပြောင်းအလဲများတစ်ဦးချင်းစီ axon ၏အရှည်နှင့်အဖြစ် axon ထုတ်လုပ်တဲ့စုစုပေါင်းအရေအတွက်က (နှစ်ဦးစလုံးပေါ်ပေါက်Rosenberg ကနှင့် Lewis က 1994; သိုးသငယ်ကို, Krimer et al ။ 2000) ။ cortex ၏အလွှာ III ကိုအတွက် DA အာရုံခံနဲ့ Pyramid အာရုံခံအကြား synapses ၏သိပ်သည်းဆတစ်ခုတိုး (လည်းရှိပါသည်သိုးသငယ်ကို, Krimer et al ။ 2000) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အထူး: D အတွက် PFC ထံမှ NACC မှ glutamatergic ဆက်သွယ်မှုအတွက်တစ်ဦးအထွတ်အထိပ်1-expressing အာရုံခံ (Brenhouse, Sonntag et al ။ 2008) ။ အဲဒီ receptor ထုနှင့်စပ်လျဉ်း Non-လူ့မျောက်သုတေသန: D ၏သောသိပ်သည်းဆအကြံပြု1 နဲ့ D2 PFC အတွက် receptors: D အတူကွဲပြားခြားနားသောနှုန်းထားများမှာတိုးမြှင့်1 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆ D ကိုထက်အစောပိုင်းရက်တွေသရုပ်ပြ2နှောင်းပိုင်း-မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် / အစောပိုင်းလူကြီးအတွက်အများဆုံးကြွေတဲ့အရာ (Tseng နှင့် O'Donnell ၂၀၀၅) ။ တစ်ဦးက post ကိုရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာလူ့သုတေသနလေ့လာမှု D ကိုတွေ့ရှိခဲ့1 အဲဒီ receptor (အသက်၏ 14-18 နှစ်ပေါင်းန်းကျင်အထွတ်အထိပ် densitiesWeickert, Webster et al ။ 2007), ၎င်းနောက်ကျဆင်းနေ။ : D ပါဝင်တဲ့ဆဲလ်တွေထဲမှာတစ်ဦးကအထွတ်အထိပ်1 အဆိုပါ PFC အတွက် receptors လည်း (မှတ်တမ်းတင်ထားသည်Andersen က, Thompson က et al ။ 2000; Weickert, Webster et al ။ 2007) ။ နှစ်ဦးစလုံး D ကိုအတွက် striatum မှာတော့ထိပ်1 နဲ့ D2 receptors (တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့အလုပ်ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ထင်ရှား, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ကျဆင်းရန်စတင်Seeman, Bzowej et al ။ 1987; Lidow နှင့် Rakic ​​1992; မွန်တဂူ, Lawler et al ။ 1999; Andersen က, Thompson က et al ။ 2002) ။ သို့သော်အခြားသက်သေအထောက်အထားများ DA အဲဒီ receptor ထု dorsal အတွက်ကျဆင်းပေမယ့်မရမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုကျော် ventral striatum (အဆင့်ဆင့်အတူတူပါပဲရှိနေဆဲရှိရာ) (ကအကြံပြုထားသည်Teicher, Andersen က et al ။ 1995) ။ DA ပို့ဆောင်ရေးအပေါ်သုတေသနမျှတသမတ်တည်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှု (အကြံပြုခြင်းအဆိုပါ midbrain အတွက်ကိုက်ညီမှုခဲ့Moll, Mehnert et al ။ 2000), (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုကျော်တိုးပွါးGalineau, Kodas et al ။ 2004), နှင့်နှောင်းပိုင်းကငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက်ထိပ် (Coulter, Happe et al ။ 1996) ။ အခွားသောသုတေသန (ထို striatum အတွက်, DA Transporter အဆင့်ဆင့်နှောင်းပိုင်းကငယ်စဉ်ကလေးဘဝသို့တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှတဆင့်တည်ငြိမ်ကျန်ကြွင်းသောအကြံပြုထားပါတယ်Coulter, Happe et al ။ 1996; Tarazi, Tomasini et al ။ 1998; Galineau, Kodas et al ။ 2004).
ဒီရှုပ်ထွေးနက်နဲမှထည့်သွင်းခြင်း, DA function ကိုအတွက်ရင့်ကျက်ပြောင်းလဲမှု DA သည့်စနစ် (ဥပမာ receptors, ရှင်းလင်းရေး, innervation) နှင့်အမူအကျင့်အပေါ်သူတို့ရဲ့တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးရှုထောင့်များ၏အပြန်အလှန်တစ်ဦးပြည့်စုံစာမေးပွဲမျက်ခြေမပြတ်ကြောင်းအကြံပြုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အပြုအမူတွေပေါ်သို့တိုက်ရိုက်တစ်ခုသို့ဆက်စပ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ် (လှံကို 2011; Luciana, Wahlstrom et al ။ 2012) ။ ဥပမာအားဖြင့်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းလုပ်သူများ DA ၏မြင့် (ပြန်လည်သုံးသပ်မြင်ဘို့ (အဓိကသို့မဟုတ်ကြိုးသတင်းအချက်အလက်တုံ့ပြန်အတွက် phasic တုံ့ပြန်မှု၏စည်းမျဉ်း impact စေခြင်းငှါLuciana, Wahlstrom et al ။ 2012)), သို့သော်ဤမျက်မြင်လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ဒါဟာ DA စနစ်ကငယ်စဉ်ကလေးဘဝသို့မဟုတ်လူကြီး (ရန်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဆွေမျိုးတစ်ဦး "functional ဖြစ်စေမျက်နှာကျက်" မှာကြောင်း posited ဖြစ်ပါတယ်ကုန်သည်များ, တေလာ et al ။ 2003), midbrain DA ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်, ခြုံငုံလုပ်သူများအဆင့်ဆင့်, innervation အဖြစ်တိုးမြှင့်အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆထိပ်ကြောင့်။ အဆိုပါအရွယ်ရောက်စာပေရန်နှင့်အတူ DA အချက်ပြလျှော့ချထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူရပ်ဆိုင်းသော်လည်း DA DA သို့မဟုတ် DA agonists ၏အုပ်ချုပ်မှုကတဆင့်ပြတိုးပွားလာ (အသစ်အဆန်း-ရှာခြင်းနှင့်ရှာဖွေရေးအပြုအမူတွေကိုတိုးပွါးကြောင်းအကြံပြုPijnenburg, Honig et al ။ 1976; Fouriezos, Hansson et al ။ 1978; သည် Le Moal ရှိမုန် 1991) ။ ဤရွေ့ကားအစောပိုင်းတွေ့ရှိချက်ခြုံငုံ DA အချက်ပြကြီးထွားလှုံ့ဆျောမှုစေပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်ချဉ်းကပ်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူ-ကြောင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း၏တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းများနှင့်တားစီး၏တိုးမြှင့် activation မှကြီးထွားမထွက်ရဆယ်ကျော်သက်ကလေးကို DA function ကိုတစ်ယူဆချက်မော်ဒယ်မှထောက်ပြတာပါ။ အပြုအမူမှမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ပြောင်းလဲ DA ပေါင်းသင်းခြင်းသည်အခြားသက်သေအထောက်အထားများ (ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်ပြပွဲထိုကဲ့သို့သောအရက်, နီကိုတင်း, အမ်ဖီတမင်းနှင့်ကိုကင်းအဖြစ်, DA လွှတ်ပေးရန်သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းမူးယစ်ဆေးမှအားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများတိုးပွားလာကြောင်းအကြံပြုAdriani, Chiarotti et al ။ 1998; Laviola, Adriani et al ။ 1999; Adriani နှင့် Laviola 2000; Badanich, Adler et al ။ 2006; Shram, Funk et al ။ 2006; Frantz, O'Dell et al ။ 2007; Mathews နှင့်မက်ကော်မစ် 2007; Brenhouse နှင့် Andersen က 2008; Varlinskaya နှင့်လှံ 2010) ။ မြီးကောင်ပေါက်ကိုလည်းပြသအလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများမှဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှု (ဆိုလိုသည်မှာပျော့ဆုတ်ခွာတုံ့ပြန်မှု, လျှော့ချ psychomotor သက်ရောက်မှု) (လျော့နည်းသွားလှံကို 2002; Doremus, Brunell et al ။ 2003; Levin, Rezvani et al ။ 2003) နှင့် DA အဲဒီ receptor ရန်တိုးမြှင် sensitivity ကို (လှံ, Shalaby et al ။ 1980; လှံတော်နှင့်ဘရိတ် 1983; Teicher, ဘာဘာ et al ။ 1993) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူနဲ့တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်သုတေသန PFC နှင့် striatum နှစ်ဦးစလုံးအတွက် DA အချက်ပြ၏အလယ်အလတ်အဆင့်ဆင့်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားပါတယ်, တစ်ဦး Yerkes-Dodson DA အချက်ပြနှင့်အပြုအမူဦး-shaped ထိုးတုံ့ပြန်မှုကွေး (inverted အောက်ပါRobbins နှင့် Arnsten 2009; Cools နှင့် D'Esposito ၂၀၁၁) ။ ဒီ model ပြီးနောက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် DA အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့် (အကောင်းဆုံးလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်လိုအပ်သောတံခါးခုံကိုကျော်ဖြတ်စေခြင်းငှါWahlstrom, Collins et al ။ 2010; Wahlstrom, White, et al ။ 2010) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် DA အချက်ပြ (စသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ပြီး cortical မှဆွေမျိုး subcortical စနစ်များရငျ့၏နှုန်းထားများအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကလွှမ်းမိုးခြင်း, PFC-မောင်းနှင်စည်းမျဉ်းထဲမှာနုနှင့်အတူ striatal အချက်ပြခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်သောဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့မညီမမျှကုန်သည်များ, တေလာ et al ။ 2003; Ernst, ထင်းရူး et al ။ 2006).
DA အချက်ပြခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ဖြစ်ပွားကြောင်းယေဘုယျရင့်ကျက်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးခြုံငုံအထွတ်အထိပ်နေသော်လည်းနှစ်ဦးစလုံး DA အချက်ပြအတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာတစ်ဦးချင်းစီအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအဖြစ်ကြောင့်မျိုးဗီဇနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေပေါင်းစပ်ဖွယ်ရှိ DA-သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပြုအမူတွေ, (ရှိDepue နှင့် Collins 1999; ဖရန့်နှင့်ဟက် 2009) ။ ထိုအဦးချင်းကွဲပြားမှု၏သဘောသဘာဝကိုနားလည်ခြင်းသိသာထင်ရှားသောကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အာဏာရှိသည်လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, DA ရှင်းလင်းရေးနှင့်ပျက်စီးခြင်း၏လုပ်သူများ DA အဆင့်ဆင့်မြင့်မားအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်မြင့် DA အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆနှင့်အောက်ပိုင်းနှုန်းထားများပိုကြီးတဲ့အတိုင်းအတာအထိ DA-modulated အပြုအမူတွေ (ဥပမာအာရုံခံစားမှု / အသစ်အဆန်းရှာ) တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံစေခြင်းငှါအတူမြီးကောင်ပေါက် DA အချက်ပြလျော့နည်းသွားထက်နှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်မြင်သည်ရရှိမှု ((Luciana, Wahlstrom et al ။ 2012)) ။ တစ်ဦးချင်းစီကိုဖြတ်ပြီးကွဲပြားသည့် - ဤတွေးဆပုံစံများဟာ DA စနစ်၏အခြေခံပြည်နယ်၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြကြောင်းကြိုတင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံထားတယ်။ တိုးတက်မှုပိုမိုနီးကပ်စွာ၏အထွတ်သူတို့ကိုတွန်းအားပေး (အနိမ့်အခြေခံအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်မှတ်ချက်ပြုကြသည်သော်လည်းဥပမာအားဖြင့်မြင့်မားသောအခြေခံ DA အဆင့်ဆင့်ရှိသည်သောသူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် DA အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်, (ဖြစ်ကောင်း inverted ဦးကွေး၏အထွတ်အထိပ်ကျော်ကသူတို့ကိုတွန်း) ချို့ယွင်း အကှေး) (Mattay, Goldberg et al ။ 2003; Apud, Mattay et al ။ 2007; Cool, ဖရန့် et al ။ 2009) ။ ဒီ model ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, ကျွန်တော် DA function ကိုအတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲမောင်းသောမျိုးဗီဇအချက်များကိုလေ့လာမယ့်မူဘောင်အတိုင်းဤသုံးပါနှင့်မည်သို့သောဤအချက်များဖှံ့ဖွိုးတိုးကျော်စံတန်ဖိုးအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီမော်ဒယ်ကိုအောက်ပါကြောင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အခြေခံအကြားတစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုကြောင့် DA စနစ်ရငျ့မှလူကြီးအတွက်ကွဲပြားမှုမှဆွေမျိုးထူးခြားတဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Imaging ကမျိုးရိုးဗီဇ
အတိုင်းအတာများ, လူ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် neurochemical စနစ်များ၏သဘောသဘာဝ characterizing pharmacological နှင့်အခြားထိုးဖောက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (ဆိုလိုသည်မှာပေ) အဖြစ်ပုံမှန်အားဖြင့်လူဦးရေဖွံ့ဖြိုးဆဲလေ့လာဖို့ရန်အသုံးပြုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး, စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက် function ကိုအပေါ် DA ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်ဇီဝယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်နှင့် testable ယူဆချက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကြိုးပမ်းများတွင်မကြာသေးမီကအားထုတ်မှုကိုတိုက်ရိုက်ပရိုတိန်း function ကို impact နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ဆယ်လူလာနှင့်စနစ်များ-Level ဦးနှောက် function ကိုသောလူ့မျိုးနွယ်၏မျိုးရိုးဗီဇအတွက်မျိုးကွဲဖော်ထုတ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြပါပြီ။ သုတေသီများ (ပိုကောင်းတဲ့လူ့အပြုအမူအပေါ်မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲနိုင်သည်များ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနားလည်ရန်အလယ်အလတ် phenotypes အဖြစ်အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ neuroimaging အစီအမံကိုအသုံးပြုခဲ့ကြHariri နှင့် Weinberger 2003) ။ ဤသည်ချဉ်းကပ်အပြုအမူအပေါ်မျိုးရိုးဗီဇလွှမ်းမိုးမှုဦးနှောက်ထဲမှာလည်ပတ်၏ဆယ်လူလာနှင့်စနစ်များအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲကကမကထပြုခဲ့သောအယူအဆအတွက် grounded ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်မှာဦးနှောက် function ကိုသို့မဟုတ် "ပုံရိပ်မျိုးရိုးဗီဇ" ပေါ်တွင်မျိုးရိုးဗီဇ polymorphic ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများလေ့လာမှုပြီးသားဦးနှောက်ဇီဝြဖစ်စဉ် (ဥပမာ (အပေါ်မျိုးရိုးဗီဇမောင်းနှင်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာထိုးထွင်းသိမြင်ပေးထားHariri နှင့် Weinberger 2003; ဘရောင်းနှင့် Hariri 2006; Drabant, Hariri et al ။ 2006; Hariri နှင့် Lewis က 2006)) ။ သို့သျောလညျးကိုတွေ့မြင်: (မီးကျောက်နှင့် Munafo 2007; Walters နဲ့ Owen 2007; Kendler နှင့် Neal 2010) ဒီချဉ်းကပ်မှု၏ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ပုံရိပ်မျိုးရိုးဗီဇလေ့လာမှုများများအတွက်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်သည်၎င်း၏ခွဲစိတ်အတိုင်းအတာများကိရိယာများနှင့်အသေးစိတ်အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့် functional ဖြစ်စေသတင်းအချက်အလက်ကို deriving ၎င်း၏စွမ်းရည်နှင့်အတူ, ဦးနှောက်ပုံရိပ်အပြုအမူအပေါ်ဗီဇများ၏သက်ရောက်မှုများချိတ်ဆက်မှုအတွက်အထူးသဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောရရှိထားသူ, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အဆိုပါ DA စနစ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပိုပြီးအခြားသူများထက်အချို့သောတစ်ဦးချင်းစီကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်မျိုးရိုးဗီဇသက်ရောက်မှုငြိမ်ဖွယ်ရှိမဟုတ်, နှင့်သက်တမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြောင်းလဲရန်, ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ် DA စနစ်၏မျိုးရိုးဗီဇ-မောင်းနှင်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလေ့လာနေ elucidate အလွန်အလားအလာရှိပါတယ်အကြောင်းပေးထား တစ်ဦးချင်းစီအပြုအမူအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအဖြစ် psychopathology ဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်အန္တရာယ်များ၏ဇီဝအခြေခံ။
အမျိုးမျိုးသော DA-related ပရိုတိန်းများအတွက်ကုဒ်ယခင်က frontostriatal ဦးနှောက် function ကိုနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာအတွက်အချင်းချင်းတစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှု (ဥပမာ (နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြကြောင်းဗီဇအတွက်မျိုးကွဲBertolino, Blasi et al ။ 2006; Drabant, Hariri et al ။ 2006; Yacubian, Sommer et al ။ 2007; Dreher, Kohn et al ။ 2009; Aarts, Roelofs et al ။ 2010), နှင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်နှင့်အတူ Impulse, အသစ်အဆန်းရှာ, ရန်လိုစရိုက်များ, အလုပ်အမှုဆောင် function ကို, မက်လုံးပေးအပြောင်းအလဲနဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်ထိုကဲ့သို့သော schizophrenia, ADHD နဲ့ပါကင်ဆန်ရောဂါအဖြစ်အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်များ၏ etiology အပါအဝင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏လေ့လာမှုမှသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းအပြုအမူ phenotypes အတွက် ((Karayiorgou, Altemus et al ။ 1997; Eley, Lichtenstein et al ။ 2003; ဧနောက်, Schuckit et al ။ 2003; Lee က, Lahey et al ။ 2007), (ပြန်လည်သုံးသပ်မြင်ဘို့Nemoda, Szekely et al ။ 2011)) ။ အောက်ပါကဏ္ဍများအတွက်ကျွန်တော် DA အချက်ပြသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းဗီဇအတွက်ဘုံအလုပ်လုပ်တဲ့ polymorphic ၏ neuroimaging လေ့လာမှုများပြန်လည်သုံးသပ်။ ကျနော်တို့တစ်ခုတည်းဘေ့ polymorphic (SNP) နှင့် variable ကိုဘေ့တွဲဖက်ထပ် (VNTR) polymorphic နှစ်ဦးစလုံး၏လေ့လာမှုများဆှေးနှေးပါမညျ။ ကျနော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (MRI နှင့် fMRI) ကို အသုံးပြု. ပုံရိပ်မျိုးရိုးဗီဇလေ့လာမှုများအပေါ်အထူးအာရုံစိုက်။ DA-related ဗီဇနှင့်အတူအမူအကျင့်အသင်းအဖွဲ့များ၏သက်သေအထောက်အထားအဖြစ် ((တခြားနေရာအတိမ်အနက်အတွက်ဥပမာပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြNemoda, Szekely et al ။ 2011; Cormier, Muellner et al ။ 2013), ကျနော်တို့တစ်ခုတည်းကိုသာပုံရိပ်မျိုးရိုးဗီဇသုတေသနအာရုံစိုက်ပါ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုစံတန်ဖိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပေမဲ့ကျနော်တို့အတွက် (ထိုကဲ့သို့သော schizophrenia နဲ့ ADHD ကဲ့သို့) ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် DA ပါဝင်သောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမမှန်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပုံရိပ်မျိုးရိုးဗီဇသုတေသန၏အဓိကတွေ့ရှိချက်အကျဉ်းချုပ်ပါပြီ စားပွဲတင် 1.
DA receptor မျိုးရိုးဗီဇ (DRD1, DRD2 နှင့် DRD4)
နှစ်ဦးစလုံး D ကို၏ဖြန့်ဝေ1- (: D1 နဲ့ D5) နှင့် D ကို2 (D2, D ကို3, D ကို4အဆိုပါ striatum အတွက်ဖြစ်ခြင်း receptors ၏အကြီးဆုံးသိပ်သည်းဆနှင့်အတူ frontostriatal function ကိုများနှင့်ဆက်သွယ်မှုအပေါ်တစ်ဦးအားကြီးသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှု, ပြုပြင်ထားတဲ့ excitatory-inhibitory အာရုံခံအချက်ပြ၏ရှုပ်ထွေးသောချိန်ခွင်လျှာအတွက်ဦးနှောက်ရလဒ်များကိုကိုဖြတ်ပြီး) -like receptors ။ နှစ်ဦးစလုံး D ကို1 နဲ့ D2receptors -like, G ပရိုတိန်း-coupled နှင့်ဆန့်ကျင်အခန်းကဏ္ဍဝတ်ပြုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဟန့်တားသိသိ adenosine monophosphate အသီးသီးအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဒါမှမဟုတ်အာရုံခံဆဲလျ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုဟန့်တားကြသည်။ : D1 နဲ့ D2 receptors အရှင်ဖြည့်စွတ်အခန်းကဏ္ဍရှိသည်။ : D1 receptors ဆွအွန်လိုင်းအချက်အလက်များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ပြည်နယ်တည်ငြိမ်ဘို့ခွင့်ပြုနှင့် D ကို2 binding အဲဒီ receptor အချက်အလက်များ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မွမ်းမံတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့် functional ပြည်နယ်များ (အကြားအကူးအပြောင်းမှုအတွက်ခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်Seaman, Durstewitz et al ။ 2001; Durstewitz နှင့် Seaman 2002; Seaman နှင့်ယန် 2004) ။ : D1 receptors တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်း, နှစ်သက်သောအပြုအမူတုံ့ပြန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် GABAergic အာရုံခံနှင့် D ကိုပိုမိုပေါများနေကြသည်2 GABAergic အာရုံခံတားစီးနှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း၏ inhibitory အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချရသောသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းအတွက်။ နှစ်ဦးစလုံး D ကိုအတွက်တိုး1 နဲ့ D2 မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်တွေ့မြင်အဖြစ် receptors, အရှင် (ထိုကဲ့သို့သောဆုလာဘ်များနှင့်အသစ်အဆန်းရှာကဲ့သို့) DA ​​မှီခိုဖြစ်ကြောင်းအပြုအမူတွေအတွက်တိုးလာမှုနိုင်သောဦးနှောက်ကိုတခုတခုအပေါ်မှာခြုံငုံ excitatory အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။
အဆိုပါ PFC, D ကိုခုနှစ်တွင်1 receptors (တာဝန် related ပစ်ခတ်ရန်တိုးမြှင့်, glutamatergic ပိရမစ်ကြီးဆဲလ်တွေအပေါ်ပြုမူFarde, Halldin et al ။ 1987; Goldman-Rakic ​​1990; Lidow, Goldman-Rakic ​​et al ။ 1991) ။ တစ်ပြိုင်နက်တည်း, D ကို1 ဒေသခံ GABAergic (inhibitory) interneurons အပေါ်အဲဒီ receptor activation (ဆီလျှော် glutamatergic သွင်းအားစုတားစီးဖို့တာဝန်ထမ်းဆောင်Durstewitz, Seaman et al ။ 2000) ။ ကန့်သတ်သုတေသန: D ၏ polymorphic ဆန်းစစ်ထားပါတယ်1-receptor ဗီဇ (DRD1) ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ / function ကိုမှစပ်လျဉ်း။ လူကြီးများကို အသုံးပြု. တစ်ခုမှာလေ့လာမှုအဘို့အ genotyped schizophrenic လူနာတစ်ဦးအလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်တာဝန်စဉ်အတွင်းပြောင်းလဲ prefrontal-parietal functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုသရုပ်ပြ DRD1 Dde ငါ 50 UTR (အတွင်း, G အစားထိုးရန်အတွက်တစ်ဦးပါဝင်သည်ဟုဘေ့ polymorphic singleTura, Turner et al ။ 2008) ။ : D တိုးမြှင့်ကြသူ AG က heterozygotes,1 receptors, ဦးနှောက်ဒေသများတစ်ဦးထက်ပိုကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဝေထားစေ့စပ်သူကို AA ကို homozygotes မှ DLPFC ဆွေမျိုးများ၏တိုးချဲ့စုဆောင်းပြသသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်တိုးတက်လာသောသိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပိုပြီးထိရောက် prefrontal အချက်ပြ (ဥပမာ (တိုးပွားလာကြောင်း prefrontal DA သေံရလဒ်များကိုအကြံပြုသည်အခြားအလုပ်နှင့်အညီဖြစ်ကြောင်းEgan, Goldberg et al ။ 2001; Mattay, Goldberg et al ။ 2003)) ။
အဆိုပါ: D2 PFC မှ striatum ဆွေမျိုးအတွက် သာ. ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတဲ့အဲဒီ receptor, excitatory ၏တားစီးနှင့် inhibitory လမ်းကြောင်း၏ disinhib tion (နှစ်ဦးစလုံးမှတဆင့် frontostriatal ဆက်သွယ်မှုအပေါ်တစ်ဦးအားကြီးသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုပြုပြင်Cepeda နှင့် Levine 1998; goto နှင့်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း 2005) ။ : D2 receptors: D (ရေတို isoform နှစ်ခုကွဲပြား isoforms ရှိ2-s): D (အရှည်လျား isoform သော်လည်း, DA လွှတ်ပေးရန်ဟန့်တား, အဓိကအားဖြင့်တစ်ဦး presynaptic autoreceptor အဖြစ်ပြုမူ2ပို့စ် Synaptic ဆဲလ်တားစီးဖို့ -L) အဓိကအားဖြင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာ (Centonze, Grande et al ။ 2003) ။ : D လျော့နည်းသွား2 : D လျော့နည်းသွားနှင့်အတူ autoreceptor function ကို DA လွှတ်ပေးရန်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီတိုးပွါး2-s (တိုးလာအသစ်အဆန်း-ရှာခြင်းနှင့်ဆုလာဘ် reactivity ကိုသရုပ်ပြZald, Cowan et al ။ 2008; Pecina, ကို Mickey et al ။ 2012) ။ အဆိုပါ: D အဘို့အကြောင်း codes တွေကိုမျိုးရိုးဗီဇအတွက် functional polymorphic2 အဲဒီ receptor (DRD2) ထိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှု mRNA ပရိုတိန်း၏ကူးယူခြင်း, နောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့ function ကို, -141 ကို C Ins / Del, Ser311Cys, Taq1A ANKK1, Taq1B, C957T, rs12364283, rs2283265 နှင့် rs1076560 အပါအဝင်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ (Zhang က, Bertolino et al ။ 2007) ။ : D သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်း polymorphic2 စညျးပု DRD2 / ANNK1 TaqIA, အ DRD1 ဗီဇ၏ promotor ဒေသတွင်တည်ရှိပြီးသောအိမ်နီးချင်း ANNK141 ဗီဇတစ်ခု Glu Lys မှအမိုင်နိုအက်ဆစ်အစားထိုးလျက်, -2C Ins / Del SNP မှုတစ်ခုကန့်သတ်အပိုင်းအစအရှည် polymorphic ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ TaqI A1 allele နှင့် Del allele နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြ (binding striatal D2 လျော့နည်းသွားArinami, Gao et al ။ 1997; Noble 2000), D ကိုလျော့နည်းသွားနှင့်တသားတလေ့လာမှုသည် TaqIA polymorphic နှင့်အတူမော်လီကျူး heterosis အကြံပြုပေမယ့်2 homozygotes မှဆွေမျိုး heterozygotes အတွက်သိပ်သည်းဆ (Pohjalainen, Nagren et al ။ 1999) ။ ထို့ကြောင့် Del နဲ့ A1 alleles (လူကြီးအတွက် ventral striatum အတွက်တိုးချဲ့ဆုလာဘ် reactivity ကိုနဲ့ဆက်စပ်ပြီCohen ကို, Young က et al ။ 2005; Forbes မဂ္ဂဇင်း, ဘရောင်း et al ။ 2009) ။ အဆိုပါ A1 allele ကိုလည်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် (တာဝန် switching စဉ်အတွင်း frontostriatal ဆားကစ်အတွက် prefrontal activation နှင့်ဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားStelzel, Basten et al ။ 2010).
အရွယ်ရောက်သူသုတေသနမတူဘဲ, သာဆယ်ကျော်သက်သင်တန်းသားများကိုသုံးပြီးအနည်းငယ်လေ့လာမှုများ A1 allele (ventral အတွက်လျော့နည်းသွားဆုလာဘ် reactivity ကိုနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့Stice နှင့် Dagher 2010) နှင့် dorsal (Stice, Spoor et al ။ 2008) striatum ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာတော့သည့်အခါ D ကိုတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားသိပ်သည်းဆလည်းမရှိ2 receptors, ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့: D အကြားဆက်ဆံရေး2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု D ကိုပစ်မှတ်ထားကြောင်း pharmacological ကြားဝင်သုံးပြီးယခင်တွေ့ရှိချက် Parallel စေခြင်းငှါ,2 receptors (Kirsch, Reuters et al ။ 2006; ဗန် der Schaaf, ဗန် Schouwenburg et al ။ 2012), မျက်မြင်လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြီးခံရဖို့မရှိသေးပါကြောင်း genotype အပြန်အလှန်အားဖြင့်တစ်ဦးသည်အသက်အကြံပြုခြင်း။
အဆိုပါ: D4 အဲဒီ receptor: D ဖြစ်ပါသည်2-like နှင့် postsynaptic striatal အာရုံခံခြင်းနှင့် Pre-Synaptic corticostriatal glutamatergic afferents နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ ကန့်သတ်သက်သေအထောက်အထား: D ကြောင်းအကြံပြု4 receptors D ကိုမှအလားတူဖွံ့ဖြိုး2 (နှောင်းပိုင်းကငယ်စဉ်ကလေးဘဝနဲ့လူကြီးသို့နောက်ဆက်တွဲကျဆင်းမှုအတွက်ထိပ်နှင့်အတူ) receptors (Tarazi, Tomasini et al ။ 1998) ။ အဆိုပါမျိုးဗီဇ (DRD4) အဆိုပါ: D အဘို့အ codes တွေကိုပြုလုပ်4 အဲဒီ receptor တစ် 48-ထပ်သို့မဟုတ် 3-ထပ်မူကွဲများတွင်အများဆုံးရလဒ်များကြောင့် exon7အတွက်အရာများ၏ 4-အခြေစိုက်စခန်း pair တစုံ VNTR အများအပြားအလုပ်လုပ်တဲ့ polymorphic ရှိပြီး, မကြာခဏလေ့လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ 7-ထပ် allele နှင့်ဆက်စပ်နေသည် (striatal အာရုံခံတစ် disinhibition မှဦးဆောင်လျှော့ချစခန်း-လျှော့ချရေးအာနိသင်ကြောင့် DA ၏ postsynaptic တားစီး, လျော့နည်းသွားAsghari, Sanyal et al ။ 1995; Seeger, Schloss et al ။ 2001) နှင့် (အ 4-ထပ် allele မှဆွေမျိုး, ventral striatum အတွက်တိုးမြှင့်ဆုလာဘ် related reactivity ကိုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်Schoots နှင့်ဗန် Tol 2003; Forbes မဂ္ဂဇင်း, ဘရောင်း et al ။ 2009; Stice, Yokum et al ။ 2012) ။ ထဲမှာတစ်ဦးက SNP DRD4 C-allele မှမျိုးဗီဇ (rs6277, -521 SNP) T-allele ဆွေမျိုးများအတွက်အာအန်အေကူးယူအတွက် 40% လျှော့ချရေးအတွက်ရလဒ်တွေကို (Okuyama, Ishiguro et al ။ 1999), အခြားလေ့လာမှုအဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှု (ကိုတွေ့ပေမယ့်Kereszturi, Kiraly et al ။ 2006) ။ ယနေ့အထိ, တဦးတည်းပုံရိပ်လေ့လာမှုကို C allele ပြပွဲများအတွက် homozygous တစ်ဦးချင်းစီ (ဆုလာဘ်ပြင်းအား၏အပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်း medial PFC / anterior cingulate activation တိုးပွားလာကြောင်းအစီရင်ခံထားပါတယ်Camara, Kramer et al ။ 2010) ။ အဆိုပါ DRD4 VNTR သားသမီးများ၏ PFC (ထဲမှာ cortical ထူလျှော့ချသည့် 7-ထပ် allele ပေါင်းသင်းခြင်း, လူဦးရေဖွံ့ဖြိုးဆဲလေ့လာခဲ့ပြီးသာလျှင်Shaw, Gornick et al ။ 2007), (ဆယ်ကျော်သက်အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုက Moderator အဖြစ်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်မက်လုံးပေးဖို့ striatal activation တိုးလာဖာရ-Edgar, Hardee et al ။ 2013), နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ကိုယ်အလေးချိန်တစ်ဦးက Moderator အဖြစ်အစားအစာဆုလာဘ်မှ activation လျော့နည်းသွား (Stice, Yokum et al ။ 2010) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ဦးနှောက် function ကိုပေါ်မှာဤ polymorphic ၏သက်ရောက်မှုအရှင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေ့ရှိချက် Parallel လိမ့်မည်။
စုပေါင်းဤလေ့လာမှုများ DA အဲဒီ receptor မျိုးရိုးဗီဇအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့မျိုးကွဲသီးခြားစီကလေးများ, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအတွက် frontostriatal ဦးနှောက် function ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ယနေ့အထိမျှလေ့လာမှုများဖှံ့ဖွိုးတိုးတတလွှားကဤ polymorphic ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ လက်ရှိသုတေသနကြောင်း: D အကြံပြု1 နဲ့ D2 အဲဒီ receptor အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆလူကြီးဖို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဆွေမျိုးအတွက်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်းအကြံပြုနှောင်းပိုင်းကလေးဘဝအတွက်အထွတ်အထိပ် densities ။ အဆိုပါ inverted ဦးမော်ဒယ်ပြီးနောက် D ကိုတိုးမြှင့်1 နဲ့ D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုဟာယေဘုယျအားဖြင့်ပိုပြီးစနစ်တကျအပြောင်းအလဲနဲ့စနစ်ဦးဆောင်ပိုပြီးအခြေခံမှာပိုမိုမြင့်မားအဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်များတွင်ပိုမိုဆိုးရွားစေခြင်းငှါအရာတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းအကြားတိုးပွားလာပြိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပေါ်စေမည်။
DA inactivation မျိုးဗီဇ (COMT, DAT1)
ထဲမှာ functional polymorphic COMT မျိုးရိုးဗီဇ
Catechol အို methyltransferase (COMT), catecholamines catabolism များအတွက်အင်ဇိုင်း, DA ပို့ဆောင်ရေးရှားပါးရှိရာ PFC (ထဲမှာ DA လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ထိန်းညှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟောင်ကောင်, Shu-Leong et al ။ 1998; Matsumoto, Weickert et al ။ 2003) ။ အဆိုပါ COMT ဗီဇအတွင်း (COMT) တစ်ဦး methionine အတွက်ရရှိလာတဲ့တစ်ခုတည်းဘေ့ polymorphic (SNP) (ဖြစ်ပါတယ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး) (valine မှValcodon 158 မှာ) အစားထိုး (Tunbridge 2010) ။ အဆိုပါ COMT Val အဆိုပါသော်လည်း allele မြင့်မား enzymatic လှုပ်ရှားမှုနဲ့အကျိုးဆက်အနိမ့် Synaptic dopamine အဆင့်ဆင့်နှင့်ဆက်စပ်နေသည် COMT တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်သုံးပုံတစ်ပုံလျော့နည်းအင်ဇိုင်းလှုပ်ရှားမှုနဲ့အကျိုးဆက်မြင့်မားသော Synaptic dopamine အတွက် allele ရလဒ်များကို (Chen က Lipska et al ။ 2004) ။ Heterozygotes ၏အလယ်အလတ်အဆင့်ဆင့်ကိုပြသ COMT လှုပ်ရှားမှု။ အများစုဟာ PFC အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလျက်ရှိနေသော်လည်း, COMT val158met polymorphic လည်း (midbrain DA လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မြစ်အောက်ပိုင်းဆိုးကျိုးများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်Meyer-Lindenberg, Kohn et al ။ 2005).
အဆိုပါ COMT val158met SNP ကျယ်ပြန့်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းများကို (စဉ်အတွင်း frontostriatal activation များ၏အခြေအနေတွင်လေ့လာခဲ့ထားပြီးEgan, Goldberg et al ။ 2001; Bilder, Volavka et al ။ 2002; မဟော်ထ, Kestler et al ။ 2002; Goldberg, Egan et al ။ 2003; Mattay, Goldberg et al ။ 2003; စိန်, Briand et al ။ 2004) အလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်, တုံ့ပြန်မှုတားစီး, ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာကိုသတ်မှတ်နှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အပါအဝငျ။ သက်သေအထောက်အထားတစ်ဦးချင်းစီအတွက်နဲ့အကြံပြု တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး allele (ဥပမာ (ကပိုထိရောက် cortical function ကိုသရုပ်ပြEgan, Goldberg et al ။ 2001; Mattay, Goldberg et al ။ 2003; Meyer-Lindenberg, Kohn et al ။ 2005)) အဖြစ် striatal activation အတွက်ဆုလာဘ်-related တိုး (Yacubian, Sommer et al ။ 2007; Dreher, Kohn et al ။ 2009ယင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီမှ) ဆွေမျိုး Val allele ။ ထို့အပွငျ DA အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်သည့်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ် COMT val158met အတူ putative inverted ဦးမော်ဒယ်နှင့်ကိုက်ညီ SNP တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး၏တာဝန်များကိုစဉ်အတွင်းလျော့နည်းသွား cortical ထိရောက်မှုဆန္ဒပြနေသောတစ်ဦးချင်းစီနှင့် Val တိုးတက်မှုသရုပ်ပြတစ်ဦးချင်းစီ (Mattay, Goldberg et al ။ 2003; Apud, Mattay et al ။ 2007) ။ ဒီသက်သေအထောက်အထားများအပေါ်အခြေခံပြီးပြုလုပ်လူကြီးများမှဆွေမျိုး DA အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ကြသူမြီးကောင်ပေါက်, တစ် function ကိုအဖြစ်အလားတူပုံစံကိုလိုက်နာစေခြင်းငှါ posited ဖြစ်ပါတယ် COMT လူကြီးများအတွက် pharmacological လေ့လာမှုများအဖြစ် genotype ။ ဒါကတင်ဆောင်လာသောမြီးကောင်ပေါက်ဖြစ်ပါသည် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး allele မှဆွေမျိုးလျော့နည်းအကျိုးရှိစွာ cortical function ကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးတံခါး, ကျော်ဖြတ်စေခြင်းငှါ Val (Wahlstrom, Collins et al ။ 2010; Wahlstrom, White, et al ။ 2010) ။ ဒါဟာဥပမာကတော့ (အချင်းချင်းတစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု genotype အပေါ်အခြေခံပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဖြတ်ပြီးဆွေမျိုး DA တစ် function ကိုအဖြစ် differential ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖြစ်ကြောင်း, အရှင်ဖြစ်နိုင် Val DA အဆင့်ဆင့်လူကြီးထက်ပိုမိုမြင့်မားနေတဲ့အခါ allele), အစောပိုင်းကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သိမြင်မှု function ကိုများအတွက်ဆွေမျိုးအားသာချက်အပ်နှင်းလိမ့်မည်။ သို့သော်ကန့်သတ်သုတေသန၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆန်းစစ်ထားပါတယ် COMT val158met အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ထဲမှာ polymorphic, ဤကနဦးလေ့လာမှုများရောထွေးဖြစ်ကြပြီးပွားလိုအပ်သည်။ ,6နှင့် 20 ၏အသက်အရွယ်အကြားတစ်ဦးချင်းစီအတွက် visuo-Spatial အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်တာဝန်စဉ်အတွင်းDumontheil et al ။ (2011), တိုကျရိုကျနှင့် parietal ဒေသများတွင်တက်ကြွစွာများအတွက် homozygous တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဖြတ်ပြီးတိုးပွားလာကြောင်းသရုပ်ပြ Val allele, ဒါပေမယ့်မရ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ယင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်သိမြင်မှု function ကို၏နှောင့်နှေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတအကြံပြုခြင်းသယ်ဆောင်, Val allele ။ Val/Val homozygotes လည်းဖြစ်ကောင်း cortical အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်နှေးကွေးတံစဉ်များကိုများနှင့်ဆွေမျိုးစွမ်းရည်ညံ့ဖျင်းခြင်းထင်ဟပ် posterior parietal cortex ဖွံ့ဖြိုးရေးကျော်နှေးကွေး cortical စဉ်းကြောင်းတွေပေါ်မယ်ပြသခဲ့သည်။ COMT မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ဆိုးကျိုးများလည်းအတူမြီးကောင်ပေါက်နှင့်အတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်ဆက်သွယ်မှု၏လေ့လာမှုများမှာတွေ့ရှိပြီ Val allele ပြအဖြူကိစ္စသမာဓိရှိတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်မှဦးနှောက် perfusion ဆွေမျိုးအနားယူလျော့နည်းသွား တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး (Thomason, Waugh et al ။ 2009; Thomason, Dougherty et al ။ 2010) ဤလေ့လာမှုများအဘယ်သူမျှမအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှိုင်းယှဉ်အဖွဲ့များနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမဟုတ်ကြပေမယ့်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, (6-84 နှစ်ပေါင်းထံမှအထိ) တဦးတည်းသက်တမ်းလေ့လာမှုမှာ ventral PFC အတွက်လျှော့မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်ပြသ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး / Met မှဆွေမျိုးတစ်ဦးချင်းစီ Val / Val ဒါပေမယ့် genotype interaction ကအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမအသက် (ဝီလျံ, Gatt et al ။ 2008).
ထဲမှာ functional polymorphic DAT1 မျိုးရိုးဗီဇ
အဆိုပါ DA Transporter (DAT) အဓိကအားဖြင့် striatum အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့် DA reuptake တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ပါသည်, ဖြန့်ချိပြီးနောက် extracellular အာကာသကနေ DA ရှင်းလင်းရေး (Jaber, Bloch et al ။ 1998) ။ DAT (အဘို့အကြောင်း codes တွေကိုမျိုးရိုးဗီဇအတွက်တစ်ဦးက VNTR polymorphicDAT1 or SLC6A3ယင်း၏3'' ဘာသာ ပြန်. မရဘဲဒေသတွင်း၌တစ်ဦး 13-အခြေစိုက်စခန်း pair တစုံ sequence ကို၏ 40 နှင့်3ပြန်လုပ်အကြား alleles အတွက်) ရလဒ်များကို (Vandenbergh, Persico et al ။ 1992) ဒေသမျိုးကွဲ coding အဖြစ်အတော်လေးရှားပါးဖြစ်ကြသည်။ အသုံးအများဆုံးထပ် alleles (9-ထပ်နှင့် 10-ထပ်) အတွက် DAT binding site ကိုသိပ်သည်းဆလျှော့ DAT စကားရပ်နှင့်ပိုမို striatal Synaptic အတူ 9-ထပ် allele ချိတ်ဆက်, ထို 10-ထပ် allele ထက် 9-ထပ် allele ဘို့သိသိသာသာလျော့နည်း DA (Fuke, Suo et al ။ 2001; ကြိတ်စက်, Asherson et al ။ 2002; VanNess, Owen et al ။ 2005), (အချို့လေ့လာမှုများဆန့်ကျင်ဘက်အကြံပြုခဲ့ကြပေမယ့်ကြိတ်စက်, Asherson et al ။ 2002; ဗန်က de Giessen, က de ဝင်း et al ။ 2009) ။ အောက်ပိုင်း DAT စကားရပ်ဖြင့် DA အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့် Synaptic DA ရှင်းလင်းရေးလျော့ကျစေပါတယ် (Cagniard, ဗာလစံ et al ။ 2006; Cagniard, Beeler et al ။ 2006) ။ FMRI သုတေသနအများဆုံးတသမတ်တည်း (ထို striatum အတွက်တိုးချဲ့ဆုလာဘ် reactivity ကိုအတူ 9R allele ဆက်စပ်Yacubian, Sommer et al ။ 2007; Dreher, Kohn et al ။ 2009; Forbes မဂ္ဂဇင်း, ဘရောင်း et al ။ 2009) ။ DAT အဓိကအား striatum အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသော်လည်းသက်သေအထောက်အထားအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်မွမ်းမံခြင်းနှင့်တာဝန် switching (ကာလအတွင်းတိုးချဲ့ ventral striatal နှင့် dorsomedial PFC activation အတူ 9-ထပ် allele ဆက်စပ်Aarts, Roelofs et al ။ 2010; Garcia က-Garcia က, ဘာစီလိုစ် et al ။ 2010), နှင့်တိုးတက်လာသော inhibitory ထိန်းချုပ်မှု supporting အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခဲ့သော, inhibitory ထိန်းချုပ်မှုစဉ်အတွင်း PFC activation တိုးလာ (Congdon, Lesch et al ။ 2008; Congdon, Constable et al ။ 2009) ။ ယင်းကို သုံး. ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ DAT1 polymorphic အဆိုပါ 9-ထပ် allele နှင့်အတူပုံမှန်အားဖွံ့ဖြိုးဆဲမြီးကောင်ပေါက် (inhibitory ထိန်းချုပ်မှုစဉ်အတွင်း prefrontal နှင့် striatal ဒေသလျှော့ချ activation ကိုသရုပ်ပြကြောင်းအကြံပြုBraet, ဂျွန်ဆင် et al ။ 2011), နှင့်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်း (Paloyelis, ထာ et al ။ 2012) ။ အဆိုပါ 1-ထပ် allele တိုးမြှင့် activation နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်သောအခါ - striatal နှင့် cortical reactivity ကို-ထက်လူကြီးအတွက်ယုတ်လျော့မှုအတွက် 9-ထပ် allele နှင့်အတူ - ဤရလဒ်များကို DAT9 genotype မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် differential စနစ်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာပိုလျှံ DA အဆင့်ဆင့်ပစ္စုပ္ပန်အခါမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်သည်, 9-ထပ် allele တင်ဆောင်လာသောတစ်ဦးချင်းစီလူကြီးထက်ဦးနှောက် function ကိုအပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါအရာ Synaptic DA ရရှိနိုင်မှု, တစ်ဦး overabundance ရှိသည်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
imaging မျိုးရိုးဗီဇသုတေသနအများစုကိုယ်စားလှယ်လောင်းဗီဇအတွက်တစ်ခုတည်းအလုပ်လုပ်တဲ့ polymorphic အာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ DA စနစ်, စနစ်အမျိုးမျိုးရှုထောင့်၏ရငျ့၏မတူညီသောနှုန်းထားများသည်စနစ်၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများများ၏ interaction ကနှင့်အခြားဦးနှောက်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အတူ DA စနစ်၏အပြန်အလှန်၏ရှုပ်ထွေး, မျိုးဗီဇသက်ရောက်မှုဖွယ်ရှိလွတ်လပ်သောမဟုတ်အကြံပြုသို့မဟုတ် dichotomous ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးပိုပြီးမကြာသေးမီကမျိုးစုံမျိုးဗီဇ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြားသို့မဟုတ်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာ interaction ကလေ့လာဖို့စတင်ပါပြီ။ အဆိုပါ DA စနစ်၏အမျိုးမျိုးသောရှုထောင့်ကြီးထွားသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲသွားတယ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်တစ်ခုတည်းဗီဇသက်ရောက်မှုများဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်အတွက်ကွဲပြားခြားနားကိုထင်ရှားစွာပြစေခြင်းငှါဖြစ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားပေးထားပါကမျိုးရိုးဗီဇ interaction ကအရွယ်ရောက်သူဦးနှောက်ထဲမှာထက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်အတွက်ကွာခြားကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ဦးချင်းစီ polymorphic ၏တန်းတူအကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားယူဆရင်, ကြိုတင်လေ့လာမှုများ (မျိုးဗီဇအကြားအပြန်အလှန်တစ်ဦး function ကိုအဖြစ်ဦးနှောက်ကို Activation အပေါ်သက်ရောက်မှုသရုပ်ပြပါပြီBertolino, Blasi et al ။ 2006; Yacubian, Sommer et al ။ 2007; Bertolino, Di et al ။ 2008; Dreher, Kohn et al ။ 2009) ။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြိုတင်လေ့လာမှုများထို့အပြင်သက်ရောက်မှုကိုပြသကြ COMT val158met SNP နှင့် DAT1 DA ရရှိမှုတိုးလာကြပြီ genotype နှင့်ဆက်စပ်တိုးမြှင့် activation သတင်းပို့ PFC နှင့် striatum နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏အကျိုးကိုမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ရလဒ်အဆင့်စဉ်အတွင်း 3'VNTR, (Yacubian, Sommer et al ။ 2007; Dreher, Kohn et al ။ 2009) ။ သို့သော်ကန့်သတ်နမူနာအရွယ်အစားကြောင့်ဤလေ့လာမှုများသာအဖြစ်တစ်ချိန်ကနှစ်ခု polymorphic ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ ပိုများသောမကြာသေးမီကသုတေသီတစ်ဦး "multilocus ပေါင်းစပ်ရမှတ်" ကို အသုံးပြု. ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်းဦးနှောက် function ကိုအပေါ်အများအပြား DA မျိုးဗီဇ၏လွှမ်းမိုးမှုစူးစမ်းကြပါပြီ (Plomin, Haworth et al ။ 2009), တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူ DA အချက်ပြ၏ဆွေမျိုးအဆင့်ဆင့်အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ခုတည်းထို့အပြင်ရမှတ်တာဝန်ပေးဖို့။ ဒီချဉ်းကပ်မှုနောက်ကွယ်မှစိတ်ကူးတစ်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာပရိုဖိုင်းကိုရမှတ်မှတဆင့်မျိုးစုံ function သက်ဆိုင်ရာမျိုးဗီဇပေါင်းစပ်လွတ်လပ်စွာ Non-သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါတစ်ခုတည်း loci ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုရှင်းပြစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ COMT, DAT1 နှင့် DA အဲဒီ receptor genotype ပေါင်းစပ်ပြီးဒါဟာသုတေသန (လူကြီးအတွက်တိုးပွားလာ DA အချက်ပြတဲ့ function ကိုအဖြစ်တိုးမြှင့် ventral striatal reactivity ကိုပြတော်မူပြီNikolova, Ferrell et al ။ 2011), နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် caudate နှင့် putamen (Stice, Yokum et al ။ 2012) ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်များလက်ခံရရှိမှုကာလအတွင်း။ ဤအတွေ့ရှိချက်များပွားများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကျော်မျိုးဗီဇ interaction က၏တူးဖော်ရေးပိုကောင်း genotype ၏စုပေါင်းသက်ရောက်မှုနားလည်နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။
ရှုပ်ထွေးသောအပြုအမူစရိုက်များများအတွက်မျိုးရိုးဗီဇအခြေခံဖွယ်ရှိ allelic အချင်းချင်းများစွာသောမျိုးဗီဇ / polymorphic နှင့်၎င်းတို့၏ interaction ကဖြတ်ပြီးအပြောင်းအလဲနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ပုံရိပ်မျိုးရိုးဗီဇသုတေသနအများစုဦးနှောက် function ကိုနှင့်တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်ဗီဇသို့မဟုတ် polymorphic လက်တဆုပ်စာအကြားအသင်းအဖွဲ့များအာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။ neuroimaging လေ့လာမှုများအတော်လေးအညီအမျှအုပ်စုများဖြန့်ဝေရန်လိုအပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြင်, ပုံရိပ်မျိုးရိုးဗီဇသုတေသနအများစုအညီအမျှအရှင်မျက်နှာသာသို့မဟုတ်ကြားနေသက်ရောက်မှုရှိခြင်းလူဦးရေအတွက်ဖြန့်ဝေနေကြသည်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း alleles အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။ ဒီချဉ်းကပ်မှုမှအဆင်မပြေသောဤမျိုးကွဲသာရှုပ်ထွေးမမှန်သို့မဟုတ်စရိုက်များအတွက်ကှဲလှဲသာသေးငယ်တဲ့အချိုးအစားကိုရှင်းပြဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, ပုံရိပ်မျိုးဗီဇ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မျိုးရိုးဗီဇလင့်များကိုရှာသည်မဟုတ်, ပိုကောင်းတဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အပြုအမူများ၏အာရုံကြောကျောထောက်နောက်ခံပြုနားလည်သဘောပေါက်ရန်။
တစ်ခုတည်းမျိုးရိုးဗီဇ polymorphic multidimensional နှင့်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောအပြုအမူတွေနဲ့စရိုက်များအပေါ်အလွန်သေးငယ်တဲ့သက်ရောက်မှုရှိကတည်းကဦးနှောက် function ကိုအပေါ်ဘုံမျိုးကွဲများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏လေ့လာမှုရရှိသောအစီအမံများ၏အကျယ်ချဲ့ sensitivity ကိုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရရန်လိုအပ်သည်။ imaging မျိုးရိုးဗီဇလေ့လာမှုများကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်အသုံးချနှင့်ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ (မသုံးဆိုလိုသည်မှာ fMRI တာဝန်များကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်စေ့စ့စပ်စပ် circumscribed ဦးနှောက်စနစ်များကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်သင်တန်းသားများကိုဖြတ်ပြီးကှဲလှဲသရုပ်ပြရမယ်) အကျိုးစီးပွား phenotypes တိုင်းတာသင့်ပါတယ်။ fMRI (လျောက်ပတ်သော Spatial နှင့်ယာယီဆုံးဖြတ်ချက်မှာဦးနှောက် function ကိုတိုင်းတာခြင်းများထဲမှအသုံးအများဆုံးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းလမ်းများဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ဇီဝဖြစ်စဉ်စားသုံးမှုအတွက်ပါရာဒိုင်း related ပြောင်းလဲမှုထင်ဟပ်, ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုသွယ်ဝိုက်အတိုင်းအတာကြောင်းပေးထားLogothetis, ပေါလု et al ။ 2001), မျိုးဗီဇသက်ရောက်မှု၏အနက်ကိုကန့်သတ်သည်။ ထို့ကြောင့် Spatial နှင့်ယာယီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကွဲပြားနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အချက်များ၏လုံလောက်သောအစီအမံဖန်တီးဦးနှောက် function ကိုနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာတိုင်းတာကြောင်း multimode ချဉ်းကပ်ပေါင်းစပ်ပြီး (ဦးနှောက် function ကိုအပေါ်နောက်ထပ်နားလည်မှုမျိုးဗီဇသက်ရောက်မှုများအတွက်အကျိုးရှိသောပါလိမ့်မယ်Bigos နှင့် Hariri 2007; Fisher သည် Munoz et al ။ 2008; Nemoda, Szekely et al ။ 2011) ။ မျိုးရိုးဗီဇသုတေသနကိုလည်း (ဆင်တူ neurofunctional / အမူအကျင့် phenotypes သုံးပြီးနှစ်ဦးစလုံးသညျလူသားတို့အတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမျိုးဗီဇ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်မျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ထားသောတိရစ္ဆာန်အမော်ဒယ်များလေ့လာနေ, ဘာသာပြန်ချက်, အလုပ်ကနေအကျိုးရှိမည်ဟုကာဇီ, Soliman et al ။ 2010) ။ key ကို DA ဗီဇများအတွက်မျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ထားသော mouse ကိုမော်ဒယ်များကို အသုံးပြု. တိရိစ္ဆာန်များမှလေ့လာမှုများလူ့အပြုအမူဘာသာပြန်ဆို၏ကန့်သတ်နေသော်လည်းအပါအဝင် COMT နှင့် DA အဲဒီ receptor မျိုးဗီဇ (ပြန်လည်သုံးသပ်မြင်ဘို့ (လူသားအလားတူဆင်တူသိမြင်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုသရုပ်ပြပါပြီကာဇီ, Soliman et al ။ 2010)) ။ ထို့ကြောင့်ကဦးနှောက်အပေါ်ဗီဇဆိုးကျိုးများလည်းမျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးအရေးကြီးသောတူညီပြသမယ်လို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပွငျဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များတိုတောင်းသက်တမ်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်၏တင်းကျပ်ထိန်းချုပ်မှု၏အားသာချက်ရှိသည်။
ပုံရိပ်သုတေသနအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရတိုးတက်လာဖို့နောက်ထပ်နည်းလမ်းအလတ်စားသက်ရောက်မှုမှသေးငယ်တဲ့ detect လုပ်ဖို့ပါဝါမတတ်နိုင်ကြောင်းနမူနာအရွယ်အစားသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကနဦးအစီရင်ခံစာများ genotype မှဦးနှောက် function ကို၏ဆွေမျိုးနီးကပ်ပုံမှန်အမူအကျင့်လေ့လာမှုများထက်နည်းပါးလာသင်တန်းသားများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခံရဖို့ဗီဇသက်ရောက်မှုခွင့်စခွေငျးငှါအကြံပြုခဲ့ကြသည်။ ဥပမာ,Munafo et al ။ (2008) အဆိုပါ serotonin Transporter ဗီဇ (တစ် VNTR polymorphic အကြားအသင်းအဖွဲ့များအစီရင်ခံခဲ့ကြကြောင်းလေ့လာမှုများတစ် Meta-analysis သည်ကောက်ယူ5-HTTLPR) နှင့် amygdala activation နှင့်တစ်ဦးပုံရိပ်မျိုးဗီဇလေ့လာမှု .70 တစ်ခု alpha အာဏာ .8 ပါဝါအောင်မြင်ရန်အကြောင်းကို 05 ပါဝင်သူတစ်ဦးစုစုပေါင်းနမူနာလိုအပ်မယ်လို့အကြံပြုသည်။ အဆိုပါ alleles တစ်အတော်လေးပင်ဖြန့်ဖြူးယူဆရင်, ဒီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှုန်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 30-35 သင်တန်းသားများကိုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်။ အလားတူပင်, အခြားသူများအသီးအသီးအုပ်စုကျော် 25 ဘာသာရပ်များ၏နမူနာအရွယ်အစား (လုံလောက်သောယုံကြည်စိတ်ချရရှိနိုင်ရန်အတွက်ယေဘုယျ fMRI လေ့လာမှုများအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြThirion, Pinel et al ။ 2007) ။ meta-လေ့လာဆန်းစစ်ယခင်ပုံရိပ်မျိုးရိုးဗီဇလေ့လာမှုများနှင့်အနာဂတ်သူတို့အတှကျစံပြနမူနာအရွယ်အစား၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားကိုဆုံးဖြတ်ရန် (DA-ဗီဇ polymorphic ၏လေ့လာမှုများအဘို့အမျက်ခြေမပြတ်ဖြစ်ပါတယ်Munafo, Bowes et al ။ 2005; ဘား, Scoriels et al ။ 2008) ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့တရားမဝင်သောတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူလေ့လာမှုများယေဘုယျအားဖြင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေကြသည်မဟုတ်အဖြစ် Meta-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း, biased ခံရဖို့လေ့ဆိုတာကိုသတိရဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါဟာနမူနာအရွယ်အစားယခင်တွေ့ရှိချက်ပုံတူပွားဖို့နဲ့ကွဲပြားခြားနားသော polymorphic ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား၏တိကျမှုအကဲဖြတ် generate နိုင်ရန်အတွက်တိုးမြှင့်ခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်ဟုယူဆရသည်။
အကျဉ်းချုပ် / နိဂုံး
တသမတ်တည်းတိုးချဲ့အာရုံရှာနှင့်အတူအပြုအမူတွင်တစ်ပြိုင်တည်းထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအပြုအမူတွေကိုယူပြီးအန္တရာယ်အတွက်တိုးမြှင့်ပေးရန်ဦးဆောင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ဆက်ရှိနေသေး။ ဤအအပြုအမူတွေကို non-ဇီဝအချက်များကကမကထပြုခဲ့ခြင်းကိုခံရနိုင်ပေမဲ့, ပိုကောင်းတဲ့သူတို့ရဲ့အကျိုးဆက်များကိုနားလည်နိုင်စေရန်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကားမောင်းဇီဝယန္တရားရဲ့အနှစ်သာရကရမည်ဖြစ်သည်။ PFC နှင့်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်လျှောက်လုံး striatum အပါအဝင်ဦးနှောက်စနစ်များအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအထောက်အထားအချက်များ။ ဤရွေ့ကားစနစ်များ motivationally မောင်းနှင်အပြုအမူတွေကိုထောကျပံ့များနှင့် psychopathology ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်အားနည်းချက်များအထောက်အကူပြုပေမည်။ အဆိုပါ PFC နှင့် striatum ထောက်ခံမှုမက်လုံးပေး DA ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အားဖြင့် modulated သောသူတို့၏အမူထူးခြားတဲ့ interconnectivity ကို, မှတစ်ဆင့်အပြုအမူတွေကိုမောင်းနှင်။ DA ရရှိနိုင်မှုနှင့်အချက်ပြသည့်ဆယ်ကျော်သက်ကာလအတွင်းကြီးထွားနေသည်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူရှင်သန်ရပ်တည်ရေးကိုထောက်ပံ့သောကျွမ်းကျင်မှုရရှိနိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးသပ္ပါယ်ဖက်ရှင်အတွက်ရှာကြံအသစ်အဆန်းမြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်။ သို့သော်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အတွက် striatum နှင့် PFC နှစ်ဦးစလုံးအတွက် DA အဆင့်ဆင့်အားဖြင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူတွေများအတွက်အားနည်းချက်တိုးမြှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့မောင်းနှင်အပြုအမူတွေဆင်းရဲအလုပ်အမှုဆောင်စည်းမျဉ်းနှင့်အတူ coupled ဆုလာဘ်တစ်ခုတိုးလာ sensitivity ကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်ချဲ့ကားပြောဆိုမှုများ။ DA အတွက်ရင့်ကျက်ပြောင်းလဲမှုယေဘုယျပုံစံများနေသော်လည်း, ဒီအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအခြေခံသောဇီဝယန္တရားများနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုထုတ်ပေးထားတဲ့ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူတွေ၌ကြီးသောအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ, သေးသောစူးစမ်းခံရဖို့သုတေသနတစ်လိုင်းလည်းမရှိ။ မျိုးဗီဇစကားရပ်အပြုအမူ function ကိုနှင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်ကိုထင်ရှားစွာပြကြောင်းရှုပ်ထွေးသောဖြစ်စဉ်များထုတ်လုပ်ရန်ဆယ်လူလာနှင့် system-level ကိုအာရုံကြောဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များမှတစ်ဆင့်သရုပ်ဆောင်, အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲများ၏မူလတန်းသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့အထိပုံရိပ်မျိုးရိုးဗီဇသုတေသနအများစုဦးနှောက်စနစ်များကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်မှာကွဲပြားခြားနားသည့်သက်တမ်းတစ်လျှောက်ပွနျလညျဖှဲ့စညျးနှင့်မျိုးဗီဇသက်ရောက်မှုဖွယ်ရှိမှုကိုထငျရှားစကိုဆက်လက်ကြောင့်ကြီးထွားလာသက်သေအထောက်အထားများရှိနေသော်လည်းလူကြီးအတွက်သို့မဟုတ် discrete အသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွင်း genotype အကြားကွဲပြားခြားနားမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားသည်။ ဤအပြောင်းလဲနေတဲ့ဘယ်နေရာတွေမှာ၏သဘောသဘာဝဖော်ထုတ်ခြင်းအသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွင်းငြိမ်ကွဲပြားခြားနားမှုတိုင်းတာခြင်းထက်ဦးနှောက်၏လေ့လာမှုပိုမိုသောအချက်အလက်များဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါကန့်သတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပုံရိပ်မျိုးရိုးဗီဇသုတေသန (ဆိုလိုသည်မှာ (Dumontheil, Roggeman et al ။ 2011) ဦးနှောက်စနစ်များကိုပွနျလညျဖှဲ့စညျးအဖြစ်ဦးနှောက် function ကိုအပေါ်ဗီဇသက်ရောက်မှု၏ညှနျကွားဖှံ့ဖွိုးတိုးကျော်ပြောင်းလဲသွားစေမည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အနာဂတ်ပုံရိပ်မျိုးရိုးဗီဇအလုပ်ထွက်ရှိသောတစ် longitudinal ဖက်ရှင်အတွက်, ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဖြတ်ပြီးဗီဇသက်ရောက်မှု (နှင့်သကျတမျး) ကိုလေ့လာသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာကြီးထွားအန္တရာယ်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းယူပြီး psychopathology ပေါ်ပေါက်ရေးတို့အတွက်အားနည်းချက်များအသိအမှတ်ပြု, အသက်တိကျတဲ့ကုသမှုဖွံ့ဖြိုးဆဲများနှင့်လူကြီးအတွက်အမူအကျင့်ရလဒ်များဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသောတစ်ဦးချင်းစီလမ်းကြောင်းဖော်ထုတ်များ၏ neurobiology ကိုနားလည်ဘို့ခိုင်ခံ့သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေကိုအခြေခံ Frontostriatal စနစ်များကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်နုများမှာ
အဆိုပါ dopamine စနစ်ကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုကျော်သိသိသာသာပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုသည်းခံ
imaging မျိုးရိုးဗီဇဦးနှောက် function ကိုအတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲများ၏ဇီဝအခြေခံလေ့လာဖို့သုံးနိုငျ
imaging မျိုးရိုးဗီဇမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် dopamine ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလေ့လာဖို့တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်နိုင်သည်
et al Aarts အီး, Roelofs တစ်ဦး။ Striatal dopamine လူသားတွေအတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအကြား Interface ကို mediates: မျိုးရိုးဗီဇပုံရိပ်ကနေသက်သေအထောက်အထား။ Neuropsychopharmacology ။ 2010; 35 (9): 1943-1951 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Adriani W က, Chiarotti F ကို။ ဓာတ်လှေကားအသစ်အဆန်းရှာခြင်းနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ periadolescent ကြွက်များတွင်ပိုင်ထိုက်သောဃ-စိတ်ကြွဆေးာင်း။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1998; 112 (5): 1152-1166 ။ [PubMed]
Adriani W က, periadolescent ကြွက်များတွင်အတင်းအကျပ်အသစ်အဆန်းများနှင့် D-စိတ်ကြွဆေးနှစ်ဦးစလုံးမှ Laviola G. အတစ်မူထူးခြားတဲ့ဟော်မုန်းများနှင့်အမူအကျင့် hyporesponsivity ။ Neuropharmacology ။ 2000; 39 (2): 334-346 ။ [PubMed]
အလက်ဇန်းဒါး GE, DeLong MR, et al ။ Basal ganglia နှင့် cortex ချိတ်ဆက် function အသားအရောင်ခွဲခြားဆားကစ်၏စင်ပြိုင်အဖွဲ့အစည်းက။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 1986; 9: 357-381 ။ [PubMed]
Andersen က SL ။ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏လမ်းကြောင်း: အခွင့်အလမ်းအားနည်းချက်သို့မဟုတ် window ၏အချက်? neuroscience Biobehav ဗျာ 2003; 27 (1-2): 3-18 ။ [PubMed]
Andersen က SL, Thompson ကအေပီ, et al ။ gonadal ဟော်မုန်းအတွက် Pubertal အပြောင်းအလဲများကိုဆယ်ကျော်သက် dopamine အဲဒီ receptor overproduction အခြေခံကြပါဘူး။ Psychoneuroendocrinology ။ 2002; 27 (6): 683-691 ။ [PubMed]
et al Andersen က SL, Thompson ကကို AT ။ ကြွက်များတွင် periadolescent ကာလအတွင်း prefrontal cortex အတွက် Dopamine အဲဒီ receptor တံစဉ်များကို။ synapses ။ 2000; 37 (2): 167-169 ။ [PubMed]
Anderson က SA, Classey JD, et al ။ မျောက် prefrontal cortex ၏အလွှာ III ကိုအတွက်ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံဆဲလျ dendritic ကျောရိုးနှင့် parvalbumin-immunoreactive chandelier အာရုံခံဆဲလျ axon ဆိပ်ကမ်း၏ synchronous ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ neuroscience ။ 1995; 67 (1): 7-22 ။ [PubMed]
Apud ဂျာ Mattay V ကို, et al ။ Tolcapone သာမန်လူ့ဘာသာရပ်များအတွက်သိမှတ်ခံစားမှုနှင့် cortical သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 32 (5): 1011-1020 ။ [PubMed]
Arinami T က, Gao M က, et al ။ အဆိုပါ dopamine D2 receptor မျိုးရိုးဗီဇ၏ကမကထဒေသတွင်း၌တစ်ဦးကအလုပ်လုပ်တဲ့ polymorphic schizophrenia နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ လူ့ Molecular မျိုးရိုးဗီဇ။ 1997;6(4): 577-582 ။ [PubMed]
et al Asghari V ကို, Sanyal က S ။ ကွဲပြားခြားနားသောလူ့ dopamine D4 အဲဒီ receptor မျိုးကွဲများက intracellular သိသိ amp အဆင့်ဆင့်၏ Modulation ။ Neurochemistry ၏ဂျာနယ်။ 1995; 65 (3): 1157-1165 ။ [PubMed]
Badanich Ka, Adler KJ, et al ။ မြီးကောင်ပေါက်နျူကလီးယပ်အတွက် preference ကိုနှင့်ကိုကင်း-သွေးဆောင် dopamine septi accumbens ကင်းသောအခြေအနေများအရပျ၌လူကြီးများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနား။ EUR J ကို Pharmacol ။ 2006; 550 (1-3): 95-106 ။ [PubMed]
et al ဘား JH, Scoriels L ကို။ အဆိုပါ catechol-Omethyltransferase ဗီဇ Val158 / 108Met polymorphic ၏သိမြင်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများ၏ meta-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 64 (2): 137-144 ။ [PubMed]
Bedard AC အ, Schulz KP, et al ။ Dopamine Transporter မျိုးရိုးဗီဇမူကွဲ ADHD နှင့်အတူလူငယ်အတွက် striatum ၏ activation modulates ။ Neuroimage ။ 2010; 53 (3): 935-942 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဂိ FM ရေ, တေလာ JB, et al ။ psychopathology ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သက်ရောက်မှုတွေ: အ postnatal ကာလအတွင်း medial prefrontal cortex အတွက် monoaminergic စနစ်များ convergence နှင့် plasticity ။ Cereb Cortex ။ 2000; 10 (10): 1014-1027 ။ [PubMed]
ဂိ FM ရေ, လိပ် M က, et al ။ အဆိုပါ hippocampal ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်သော့ချက် relay ကိုဇုန်၏ Myelination ကလေးဘဝ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးစဉ်အတွင်းလူ့ဦးနှောက်ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1994; 51 (6): 477-484 ။ [PubMed]
Bertolino တစ်ဦးက, Blasi, G, et al ။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာမှတ်ဉာဏ် cortical လှုပ်ရှားမှုအလုပ်လုပ်အပေါ် dopamine ထိန်းညှိဗီဇအတွက်မျိုးဗီဇမူကွဲ၏အပိုဆောင်းဆိုးကျိုးများ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2006; 26 (15): 3918-3922 ။ [PubMed]
Bertolino တစ်ဦးက, Di GA, et al ။ dopamine ထိန်းညှိဗီဇအကြား Epistasis မှတ်ဉာဏ်တာဝန်များကိုစဉ်အတွင်းလူ့ hippocampus တစ် nonlinear တုံ့ပြန်မှုသတ်မှတ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 64 (3): 226-234 ။ [PubMed]
Bigos KL, Hariri AR ။ Neuroimaging: မျိုးဗီဇ၏ interface ကိုမှာနည်းပညာများ, ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူ။ Neuroimaging Clin.N.Am. 2007; 17 (4): 459-467 ။ VIII ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Bilder RM, Volavka J ကို။ အဆိုပါ COMT Val ၏ Neurocognitive ဆက်စပ်မှု (158) နာတာရှည် schizophrenia အတွက် polymorphic တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 52 (7): 701-707 ။ [PubMed]
Bjork JM, Knutson B, et al ။ မြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာမက်လုံးပေး-ရူးနှမ်းဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်: တူညီနှင့်လူငယ်လူကြီးများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားမှု။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24 (8): 1793-1802 ။ [PubMed]
Bjork JM, Smith က AR, et al ။ မြီးကောင်ပေါက်, လူကြီးများနှင့်ဆုလာဘ်: fMRI သုံးပြီးစိတ်ခွန်အားနိုး neurocircuitry စုဆောင်းမှုနှိုင်းယှဉ်။ PLoS.One ။ 2010;5(7): e11440 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Blakemore SJ, Robbins TW ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ထဲမှာ။ နတ် neuroscience ။ 2012; 15 (9): 1184-1191 ။ [PubMed]
et al Braet W က, ဂျွန်ဆင် Ka ။ တုန့်ပြန်တားစီးနှင့်အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်း fMRI activation: ပုံမှန်အားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်နှင့် ADHD ရောဂါရှိသူများဖွံ့ဖြိုးဆဲထဲမှာ DAT1 ဗီဇ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Neuropsychologia ။ 2011; 49 (7): 1641-1650 ။ [PubMed]
Brenhouse HC, Andersen က SL ။ လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, မျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင်ကင်းသောအခြေအနေများအရပျကို preference ကို၏အားကောင်း reinstatement နှောင့်နှေး။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2008; 122 (2): 460-465 ။ [PubMed]
et al Brenhouse HC, Sonntag KC ။ prefrontal cortex projection အာရုံခံအပေါ်ယာယီ D1 dopamine အဲဒီ receptor စကားရပ်: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုတိုးမြှင့်စိတ်ခွန်အားနိုး salience မှဆက်ဆံရေးမျိုး။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28 (10): 2375-2382 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဘရောင်းသည် SM, Hariri AR ။ မျိုးဗီဇ၏ဆက်စပ်မှုတွေရှာဖွေစူးစမ်း, ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူ: Neuroimaging serotonin ဗီဇ polymorphic ၏လေ့လာမှုများ။ Cogn Affect.Behav.Neurosci ။ 2006;6(1): 44-52 ။ [PubMed]
Cagniard B က, ဗာလစံ PD, et al ။ တစ်အစားအစာအကျိုးသည်လှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်နာတာရှည်မွငျ့မား dopamine ပြပွဲနှင့်အတူကြွက်, ဒါပေမယ့်သင်ယူမှုမဟုတ်ပါဘူး။ Neuropsychopharmacology: Neuropsychopharmacology ရဲ့အမေရိကန်ကောလိပ်၏ ficial စာအုပျ၏။ 2006; 31 (7): 1362-1370 ။ [PubMed]
Cagniard B, Beeler ဂျာ et al ။ Dopamine အသစ်သောသင်ယူမှု၏မရှိခြင်းအတွက်စွမ်းဆောင်ရည် scales ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2006; 51 (5): 541-547 ။ [PubMed]
et al Camara အီး, Kramer um ။ ဆုလာဘ်၏ valence နှင့်ပြင်းအားနှင့်ဆက်စပ်သောဦးနှောက် Active အပေါ် COMT (Val108 / 158Met) နှင့် DRD4 (SNP-521) dopamine genotype ၏ဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2010; 20 (8): 1985-1996 ။ [PubMed]
Cao J ကို, Lotfipour S က, et al ။ ကိုကင်း-အထိခိုက်မခံအာရုံကြောယန္တရားများ၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးရငျ့။ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 32 (11): 2279-2289 ။ [PubMed]
et al Casey BJ, Getz S က။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်။ dev ဗျာ 2008; 28 (1): 62-77 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Casey BJ, Soliman က F ။ imaging မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး: စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ကတိတော်များ။ Hum.Brain Mapp ။ 2010; 31 (6): 838-851 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Centonze: D, Grande ကို C, et al ။ striatal interneurons အပေါ် dopamine ၏ presynaptic နှင့် postsynaptic လုပ်ရပ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက် receptor Subtype ။ neuroscience ၏ဂျာနယ်: အာရုံကြောသိပ္ပံများအတွက် Society ၏တရားဝင်ဂျာနယ်။ 2003; 23 (15): 6245-6254 ။ [PubMed]
Cepeda ကို C, Levine က MS ။ Dopamine နှင့် neostriatum အတွက် N-methyl-D-aspartate အဲဒီ receptor interaction က။ Dev မှ neuroscience ။ 1998; 20 (1): 1-18 ။ [PubMed]
ကုန်သည်များ RA, တေလာ JR, et al ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်မှုများဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ neurocircuitry: စွဲအားနည်းချက်၏အရေးပါသောကာလ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 160 (6): 1041-1052 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Chen က J ကို, Lipska ကယ်, et al ။ catechol-Omethyltransferase (COMT) တွင်မျိုးဗီဇမူကွဲ၏ functional ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: mRNA အပေါ်သက်ရောက်မှု, ပရိုတိန်းနှင့်အင်ဇိုင်းလှုပ်ရှားမှု postmortem လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ။ လူ့မျိုးရိုးဗီဇ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2004; 75 (5): 807-821 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Cohen ကို MX, Young က J ကို, et al ။ extraversion နှင့် dopamine မျိုးရိုးဗီဇအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအာရုံကြောဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ ဦးနှောက်သုတေသန။ သိမှုကဦးနှောက်သုတေသန။ 2005; 25 (3): 851-861 ။ [PubMed]
et al Congdon အီး, Constable RT ကို။ တုန့်ပြန်တားစီးနေစဉ်အတွင်းအာရုံကြော activation အပေါ် SLC6A3 နှင့် COMT အပြောင်းအလဲ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ဇီဝဗေဒစိတ်ပညာ။ 2009; 81 (3): 144-152 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Congdon အီး, Lesch KP ။ Impulse များအတွက်ဂယက်: DRD4 နှင့် DAT polymorphic ကျန်းမာလူကြီးများအတွက်အမူအကျင့်တားစီး၏ analysis ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျိုးရိုးဗီဇ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ အပိုင်းခ, အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမျိုးရိုးဗီဇ: စိတ်ရောဂါမျိုးရိုးဗီဇ၏နိုင်ငံတကာလူ့အဖွဲ့အစည်း၏တရားဝင်ထုတ်ဝေ။ 2008; 147B (1): 27-32 ။ [PubMed]
အပြုအမူများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက် dopamine ၏ R. အခန်းက္ပအေး။ အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်။ 2008; 14 (4): 381-395 ။ [PubMed]
Cools R, D'Esposito အမ် Inverted-U-dopamine လုပ်ရပ်များသည်လူ့အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဉာဏ်နှင့်သိမှုထိန်းချုပ်မှုတို့ဖြစ်သည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2011; 69 (12): e113-e125 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al R ကို, ဖရန့် MJ, အေး။ Striatal dopamine ရလဒ်ကို-တိကျတဲ့မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်လေ့လာသင်ယူမှုနှင့် dopaminergic မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးရန်၎င်း၏ sensitivity ကိုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2009; 29 (5): 1538-1543 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Cormier က F, Muellner J ကို။ ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိသည့် Impulse Control Disorders ၏မျိုးရိုးဗီဇ။ J ကိုအာရုံကြော Transm ။ 2013; 120 (4): 665-671 ။ [PubMed]
et al Coulter CL, Happe ဟောင်ကောင်။ တစ်အရေအတွက် autoradiographic လေ့လာမှု: အ dopamine ပို့ဆောင်ရေး Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1996; 92 (2): 172-181 ။ [PubMed]
Dahl RE ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု: အားနည်းချက်များနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုတဲ့ကာလ။ Keynote လိပ်စာ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2004; 1021: 1-22 ။ [PubMed]
Depue RA, Collins က PF ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ဖွဲ့စည်းပုံ၏ Neurobiology: dopamine, မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများ၏ပံ့ပိုးကူညီခြင်း, extraversion ။ အဆိုပါအပြုအမူများနှင့်ဦးနှောက်သိပ္ပံ။ 1999; 22 (3): 491-517 ။ ဆွေးနွေးမှု 518-469 ။ [PubMed]
et al di Martino ကတစ်ဦး, Scheres တစ်ဦး။ လူ့ striatum ၏ functional ဆက်သွယ်မှု: တစ်အနားယူပြည်နယ် FMRI လေ့လာမှု။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2008; 18 (12): 2735-2747 ။ [PubMed]
စိန်တစ်ဦးက, Briand L ကို, et al ။ ကလေးများအတွက် prefrontal သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများမျိုးရိုးဗီဇနှင့် neurochemical မော်ဂျူ။ Am.J.Psychiatry ။ 2004; 161 (1): 125-132 ။ [PubMed]
Doremus TL, Brunell SC, et al ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်စူးရှသောအီသနောထံမှဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း Anxiogenic ဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2003; 75 (2): 411-418 ။ [PubMed]
Drabant EM, Hariri AR, et al ။ Catechol အို-methyltransferase val158met genotype နှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေ arousal နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်ဆက်စပ်သောအာရုံကြောယန္တရားများ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006; 63 (12): 1396-1406 ။ [PubMed]
et al Dreher JC, Kohn: P ။ လူ့ဆုလာဘ်စနစ်၏ dopamine ဗီဇလွှမ်းမိုးမှု Response အတွက်အပြောင်းအလဲ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2009; 106 (2): 617-622 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Dumontheil ငါ Roggeman ကို C, et al ။ ဖွံ့ဖြိုးရေးစဉ်အတွင်းအလုပ်အဖွဲ့မှတ်ဉာဏ်နှင့်ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်အပြောင်းအလဲများအပေါ် COMT genotype ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2011 [PubMed]
Durstewitz: D, Seaman JK ။ အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အတွက် dopamine D1 receptors ၏ကွန်ပျူတာအခန်းကဏ္ဍ။ အာရုံကြောကွန်ရက်များ: နိုင်ငံတကာအာရုံကြောကွန်ယက် Society ၏တရားဝင်ဂျာနယ်။ 2002; 15 (4-6): 561-572 ။ [PubMed]
Durstewitz: D, Seaman JK, et al ။ prefrontal cortex ၏ကွန်ယက်မော်ဒယ်အတွက်နှောင့်နှေး-ကာလလှုပ်ရှားမှု Dopamine-mediated တည်ငြိမ်။ Neurophysiology ၏ဂျာနယ်။ 2000; 83 (3): 1733-1750 ။ [PubMed]
Durston S က, Davidson MC, et al ။ ဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်အတူ focal cortical လှုပ်ရှားမှုမှပျံ့ထံမှတစ်ဦးကပြောင်းကုန်ပြီ။ Dev မှသိပ္ပံ။ 2006;9(1): 1-8 ။ [PubMed]
Durston S က, Fossella ဂျာ et al ။ Dopamine Transporter genotype striatal activation မှတဆင့်အာရုံစိုက်မှု-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါ၏မိသားစုအန္တရာယ်ကိုဖော်ပြတယ်။ J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 47 (1): 61-67 ။ [PubMed]
Egan MF, Goldberg က TE, et al ။ schizophrenia များအတွက်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး function ကိုများနှင့်စွန့်စားမှုအပေါ် COMT Val108 / 158 Met genotype ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Proc.Natl.Acad.Sci.USA 2001; 98 (12): 6917-6922 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Eley TC, Lichtenstein P ကို, et al ။ ရန်လိုခြင်းနှင့် nonaggressive antisocial အပြုအမူများ၏ etiology တစ် longitudinal အပြုအမူမျိုးဗီဇစိတ်ဖြာ။ Dev.Psychopathol ။ 2003; 15 (2): 383-402 ။ [PubMed]
et al ဧနောက်, MA, Schuckit MA ။ အလယ်အလတ် phenotypes အသုံးပြု. အရက်၏မျိုးရိုးဗီဇ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2003; 27 (2): 169-176 ။ [PubMed]
နိုင်ကြောင်း SL, Lewis က DA ။ မျောက် prefrontal cortex အတွက် parvalbumin- နှင့်ဂါဘမြို့သား Transporter-immunoreactive axon ဆိပ်ကမ်း၏ Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ J.Comp Neurol ။ 2002; 448 (2): 186-202 ။ [PubMed]
Ernst M က, Daniele T က, et al ။ ဆယ်ကျော်သက်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူအပေါ်နယူးအမြင်များ: အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အေးစက်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2011; 1 (4): 377-389 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ernst M က, Fudge JL ။ လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ neurobiological မော်ဒယ်: အ triadic node များ၏ခန္ဓာဗေဒ, ဆက်သွယ်မှုနဲ့ ontogeny ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2009; 33 (3): 367-382 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ernst M က, နယ်လ်ဆင် EE, et al ။ လူကြီးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အကျိုးအမြတ်လက်ခံရရှိခြင်းနှင့်ပျက်ကွက်မှတုံ့ပြန်မှုအတွက် Amygdala နှင့်နျူကလိယ accumbens ။ Neuroimage ။ 2005; 25 (4): 1279-1291 ။ [PubMed]
Ernst M က, ထင်းရူး DS, et al ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်အပြုအမူများ၏ neurobiology ၏ Triadic မော်ဒယ်။ Psychol Med ။ 2006; 36 (3): 299-312 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
မျှတသော DA, Cohen ကို AL, et al ။ ဦး နှောက်ကွန်ယက်များသည်“ ဒေသတွင်းမှဖြန့်ဝေထားသောအဖွဲ့အစည်းသို့” ဖွံ့ဖြိုးသည်။ PLoS ကွန်ပျူတာ Biol ။ 2009;5(5): e1000381 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Falkner FT, သားရေလုပ်သမား JM ။ လူ့တိုးတက်မှုနှုန်း: တစ်ပြည့်စုံကျမ်း။ နယူးယောက်: Plenum စာနယ်ဇင်း; 1986 ။
Farde L ကို, Halldin ကို C, et al ။ 11C-SCH 23390 နှင့် 11C-raclopride သုံးပြီးလူ့ dopamine အဲဒီ receptor Subtype ၏ပေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Psychopharmacology (Berl) 1987; 92 (3): 278-284 ။ [PubMed]
Fisher ကလေး, Munoz Ke, et al ။ psychopathology များအတွက်အန္တရာယ်၏ neurogenetic လမ်းကြောင်း၏ identification ။ Am.J.Med.Genet.C.Semin.Med.Genet ။ 2008; 148 (2): 147-153 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
မီးကျောက် J ကို, Munafo MR ။ စိတ်ရောဂါမျိုးရိုးဗီဇအတွက် endophenotype အယူအဆ။ Psychol Med ။ 2007; 37 (2): 163-180 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Floresco SB အနောက် AR, et al ။ dopamine အာရုံခံဆဲလျပစ်ခတ်ရန်၏ Afferent မော်ဂျူ differential လုပ်သူများနှင့် phasic dopamine ဂီယာထိန်းညှိ။ နတ် neuroscience ။ 2003;6(9): 968-973 ။ [PubMed]
et al Forbes မဂ္ဂဇင်း EE, ဘရောင်းသည် SM ။ dopamine neurotransmission သက်ရောက်မှု၏အစိတ်အပိုင်းများအတွက်မျိုးဗီဇမူကွဲ Impulse နှင့်ဆက်စပ် ventral striatal reactivity ကို။ Mol.Psychiatry ။ 2009; 14 (1): 60-70 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Fouriezos, G, Hansson P ကို, et al ။ ကြွက်များတွင်ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်၏ Neuroleptic-သွေးဆောင်ကို attenuation ။ J.Comp Physiol Psychol ။ 1978; 92 (4): 661-671 ။ [PubMed]
ဖရန့် MJ, ဆုံးဖြတ်ချက်များ-based avoidance မှဟက် K. မျိုးဗီဇပံ့ပိုးမှုများကို: striatal D2 အဲဒီ receptor polymorphic ။ neuroscience ။ 2009; 164 (1): 131-140 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Frantz KJ, O'Dell LE ။ periadolescent နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ကိုကင်းအားအပြုအမူနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ။ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 32 (3): 625-637 ။ [PubMed]
Fuke S က, Suo S က, et al ။ လူ့ dopamine Transporter (DAT1) မျိုးဗီဇ၏ VNTR polymorphic ဗီဇစကားရပ်သာသက်ရောက်သည်။ Pharmacogenomics ။ 2001; 1 (2): 152-156 ။ [PubMed]
et al Galineau L ကို, Kodas အီး။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine နှင့် serotonin ပို့ဆောင်ရေး Ontogeny: တစ်ခု autoradiographic လေ့လာမှု။ neuroscience လက်တ။ 2004; 363 (3): 266-271 ။ [PubMed]
သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare က TA, et al ။ orbitofrontal cortex မှဆွေမျိုးအဆိုပါ accumbens ၏အစောပိုင်းကဖှံ့ဖွိုးတိုးတမြီးကောင်ပေါက်အတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူအခြေခံလိမ့်မယ်။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26 (25): 6885-6892 ။ [PubMed]
et al Garcia က-Garcia က M ကို, ဘာစီလိုစ်က F ။ သိမြင်မှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏အာရုံကြောဆက်စပ်အပေါ် dopamine Transporter DAT1 genotype ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2010; 31 (4): 754-760 ။ [PubMed]
Geier CF, Luna ခမက်လုံးပေးအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး၏ရငျ့။ Pharmacol.Biochem.Behav ။ 2009; 93 (3): 212-221 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Giedd ဖြစ်မှု, Blumenthal J ကို, et al ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု: တစ် longitudinal MRI လေ့လာမှု။ နတ် neuroscience ။ 1999;2(10): 861-863 ။ [PubMed]
Gilsbach S က, Neufang S က, et al ။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်ဆက်စပ်အာရုံကြောကွန်ရက်များပေါ်တွင် DRD4 genotype ၏ဆိုးကျိုးများ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2012;2(4): 417-427 ။ [PubMed]
Goldberg က TE, Egan MF, et al ။ အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အတွက်အလုပ်အမှုဆောင် subprocesses: catechol-O-methyltransferase Val158Met genotype နှင့် schizophrenia မှဆက်ဆံရေးမျိုး။ Arch.Gen.Psychiatry ။ 2003; 60 (9): 889-896 ။ [PubMed]
Goldman-Rakic ​​ဆာ။ အဆိုပါနှောက် cortex အတွက်စင်ပြိုင်စနစ်များ: သိမှတ်ခံစားမှု၏မြေမျက်နှာသွင်ပြင်။ ခုနှစ်တွင်: Arbib MA, ရော်ဘင်ဆင်ဂျာအယ်ဒီတာများ။ သဘာဝနှင့်အတုအပြိုင်တွက်ချက်မှု။ နယူးယောက်: MIT ကစာနယ်ဇင်း; 1990 ။ စစ။ 155-176 ။
Goldman-Rakic ​​PS, Brown က RM ။ မျောက်တွေကို၏နှောက် cortex အတွက် monoamine အကြောင်းအရာနှင့်ပေါင်းစပ်၏ Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 1982; 256 (3): 339-349 ။ [PubMed]
goto Y ကိုရေ့ AA ကို။ နျူကလီးယပ်အတွက် limbic နှင့် prefrontal cortical plasticity အကြား Dopamine-မှီခို interaction က accumbens: ကင်းာင်းအားဖြင့်နှောင့်အယှက်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 47 (2): 255-266 ။ [PubMed]
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို, Floresco SB, et al ။ dopaminergic အာရုံခံခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေကိုထိန်းချုပ်၏ပစ်ခတ်ရန်၏စည်းမျဉ်း။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2007; 30 (5): 220-227 ။ [PubMed]
Hariri AR, Lewis က DA ။ မျိုးရိုးဗီဇနှင့်လက်တွေ့ Psychiatry များ၏အနာဂတ်။ Am.J.Psychiatry ။ 2006; 163 (10): 1676-1678 ။ [PubMed]
Hariri AR, Weinberger DR ။ imaging Genomics ။ Br.Med.Bull ။ 2003; 65: 259-270 ။ [PubMed]
Haycock JW, Becker က L ကို, et al ။ dopamine အတွက်အသက်အရွယ်-related အပြောင်းအလဲများနှင့်လူ့ striatum အခြား presynaptic dopaminergic အမှတ်အသားများအကြားကွာဟမှုမှတ်သား။ Neurochemistry ၏ဂျာနယ်။ 2003; 87 (3): 574-585 ။ [PubMed]
Hedner T က, Iversen K သည်, et al ။ ကြွက်များတွင် postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းဗဟိုဂါဘမြို့သားယန္တရားများ: neurochemical ဝိသေသလက္ခဏာများ။ J ကိုဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Transm ။ 1984; 59 (2): 105-118 ။ [PubMed]
ဟောင်ကောင် J ကို, Shu-Leong H ကို, et al ။ လူ့ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက် catechol-O-methyltransferase ထုတ်ဖော်ဖြန့်ဖြူး။ Neuroreport ။ 1998;9(12): 2861-2864 ။ [PubMed]
Huttenlocher PR စနစ်။ လူ့ဦးနှောက် cortex ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ Morphometric လေ့လာမှု။ Neuropsychologia ။ 1990; 28 (6): 517-527 ။ [PubMed]
ဟွမ် K ကို Velanova K သည်, et al ။ တစ်ဦး functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ထိရောက်သောဆက်သွယ်မှုလေ့လာမှု: inhibitory ထိန်းချုပ်မှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေခံအထက်မှအောက်သို့တိုကျရိုကျသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးကွန်ရက်အားကောင်းလာ။ J ကို neuroscience ။ 2010; 30 (46): 15535-15545 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Jaber M က, Bloch B, et al ။ အမူအကျင့်, အ dopamine Transporter ဗီဇ inactivation ၏ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးအကျိုးဆက်များ။ CR Seances Soc Biol ္တရ။ 1998; 192 (6): 1127-1137 ။ [PubMed]
Jernigan TL, Trauner DA, et al ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း Vivo အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာလူ့ cerebrum ၏ရင့်ကျက်။ ဦးနှောက်။ 1991; 114 (P Á 5): 2037-2049 ။ [PubMed]
Karayiorgou M က, Altemus M က, et al ။ obsessive-compulsive ရောဂါများအတွက်အန္တရာယ်အချက်အဖြစ်အနိမ့် catechol-Omethyltransferase လှုပ်ရှားမှုအဆုံးအဖြတ် genotype ။ Proc.Natl.Acad.Sci.USA 1997; 94 (9): 4572-4575 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kendler KS, Neal MC ။ Endophenotype: တစ်အယူအဆရေးရာဆန်းစစ်။ Molecular Psychiatry ။ 2010; 15 (8): 789-797 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Kereszturi အီး, Kiraly အို။ မှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှုအပေါ်လူ့ dopamine D521 receptor မျိုးရိုးဗီဇကမကထအတွက်-4 ကို C / T က polymorphic ၏တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ BMC မော်လီကျူးဇီဝဗေဒ။ 2006; 7: 18 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kirsch P ကိုရိုက်တာက M, et al ။ imaging ဗီဇ-ပစ္စည်းဥစ္စာ interaction က: အ DRD2 TaqIA polymorphic ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ဆုလာဘ်များမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်းဦးနှောက်ကို Activation အပေါ် dopamine agonist bromocriptine ။ neuroscience လက်တ။ 2006; 405 (3): 196-201 ။ [PubMed]
သိုးသငယ်ကို ek, Krimer LS, et al ။ မျောက်တွေကို၏ prefrontal cortex အတွက်ဖော်ထုတ်အာရုံခံမှ catecholamines နှင့် serotonin သွင်းအားစု၏ postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ Differential ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2000; 20 (23): 8780-8787 ။ [PubMed]
Laviola, G, Adriani W က, et al ။ လူ့ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်တိရစ္ဆာန်အမော်ဒယ်များအတွက် psychostimulants မှအားနည်းချက်များအတွက် Psychobiological အန္တရာယ်အချက်များ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1999; 23 (7): 993-1010 ။ [PubMed]
Laviola, G, Macri S က, et al ။ စွန့်စားမှု-ယူပြီးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်အပြုအမူ: psychobiological ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အစောပိုင်းဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2003; 27 (1-2): 19-31 ။ [PubMed]
သည် Le Moal က M ရှိမုန်အိပ်ချ် Mesocorticolimbic dopaminergic ကွန်ယက်ကို: functional ဖြစ်စေခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်းအခန်းကဏ္ဍ။ ဇီဝကမ္မပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 1991; 71 (1): 155-234 ။ [PubMed]
et al Lee ကအက်စ်အက်စ်, Lahey BB ။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးရှစ်နှစ် longitudinal လေ့လာမှုမှာနှောင့်အယှက်အပြုအမူမမှန်နှင့်အတူ dopamine Transporter genotype ၏အသင်းမှ။ Am.J.Med.Genet.B Neuropsychiatr.Genet ။ 2007; 144B (3): 310-317 ။ [PubMed]
Levin ED, Rezvani AH, et al ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လုပ်ပါတယ်ဆယ်ကျော်သက်-စတင်ခြင်းနီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 2003; 169 (2): 141-149 ။ [PubMed]
Lewis က DA ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း prefrontal cortex ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး: schizophrenia အတွက်အားနည်းချက်အာရုံကြောဆားကစ်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်။ Neuropsychopharmacology ။ 1997; 16 (6): 385-398 ။ [PubMed]
Lewis က DA, အ prefrontal cortex နဲ့ schizophrenia များ၏ pathophysiology အတွက် Gonzalez-Burgos G. အအခ်ါ excitatory ဆက်သွယ်မှု။ ဦးနှောက် Res Bull ။ 2000; 52 (5): 309-317 ။ [PubMed]
Lidow က MS, Goldman-Rakic ​​PS, et al ။ အဆိုပါမျောက်နှောက် cortex ၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများအတွက် neurotransmitter receptors ၏ overproduction ညှိ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1991; 88 (22): 10218-10221 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lidow က MS, postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတစဉ်အတွင်းမျောက် neocortex အတွက် monoaminergic neurotransmitter အဲဒီ receptor ထုတ်ဖော် Rakic ​​P. စီစဉ်ခြင်း။ Cereb Cortex ။ 1992;2(5): 401-416 ။ [PubMed]
Liston ကို C, Watts R ကို, et al ။ Frontostriatal microstructure သိမြင်မှုထိန်းချုပ်အကျိုးရှိစွာစုဆောင်းမှု modulates ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2006; 16 (4): 553-560 ။ [PubMed]
Logothetis NK, ပေါလုက M ဂျာ et al ။ အဆိုပါ fMRI signal ကို၏အခြေခံ၏ Neurophysiological စုံစမ်းစစ်ဆေး။ သဘာဝ။ 2001; 412: 150-157 ။ [PubMed]
Luciana M က, Wahlstrom: D, et al ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှု၏ Dopaminergic မော်ဂျူ: အချက်ပြများတွင်အသက်အရွယ်-related အပြောင်းအလဲတစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့် Self-စည်းမျဉ်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဂယက်ရိုက်။ dev Psychol ။ 2012; 48 (3): 844-861 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al ဟော်ထ AK, Kestler LJ ။ prefrontal သိမှတ်ခံစားမှုတစ်ခုစမ်းသပ်အပေါ် COMT ဗီဇနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ polymorphic ။ Am.J.Psychiatry ။ 2002; 159 (4): 652-654 ။ [PubMed]
Mathews IZ, မက်ကော်မစ် CM ။ နှောင်းပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်အမျိုးသမီးနှင့်အထီးကြွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူများထံမှကွဲပြားပေမယ့်မပေးစိတ်ကြွဆေးအဘို့အခွအေနမြေားရာအရပျ preference ကိုပါ။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 2007; 18 (7): 641-650 ။ [PubMed]
Matsumoto က M, Weickert CS, et al ။ လူ့ခြင်းနှင့်ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ Catechol အို-methyltransferase mRNA စကားရပ်: cortical အာရုံခံ function ကိုတစ်အခန်းကဏ္ဍများအတွက်အထောက်အထား။ neuroscience ။ 2003; 116 (1): 127-137 ။ [PubMed]
Mattay VS, Goldberg က TE, et al ။ စိတ်ကြွဆေးဖို့ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုအတွက် Catechol အို-methyltransferase val158-တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး genotype နှင့်တစ်ဦးချင်းအပြောင်းအလဲ။ Proc.Natl.Acad.Sci.USA 2003; 100 (10): 6186-6191 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al McCutcheon je, အဖြူရောင် FJ ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ dopamine ဆဲလ် neuroadaptations အတွက်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 66 (8): 801-803 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Mechelli တစ်ဦးက, Tognin S က, et al ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက် psychopathology affective မှမျိုးဗီဇအားနည်းချက်: တစ်ပေါင်းစပ် voxel-based morphometry နှင့် functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 66 (3): 231-237 ။ [PubMed]
et al Meyer-Lindenberg တစ်ဦးက, Kohn PD ။ လူသားတွေအတွက် Midbrain dopamine နဲ့ prefrontal function ကို: COMT genotype ခြင်းဖြင့်အပြန်အလှန်နှင့်မော်ဂျူ။ Nat.Neurosci ။ 2005; 8 (5): 594-596 ။ [PubMed]
et al Mill J ကို, Asherson P ကို။ အဆိုပါ dopamine Transporter ဗီဇ၏ဖော်ပြချက်3'UTR VNTR အားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်: ဦး နှောက်နှင့်အရေအတွက် RT-PCR ကိုအသုံးပြု။ Lymphocytes ကနေအထောက်အထား။ နံနက် J ကို Med မျိုးရိုးဗီဇ။ 2002; 114 (8): 975-979 ။ [PubMed]
Moll GH, Mehnert ကို C, et al ။ အစောပိုင်းလူငယ်ဘဝကနေနှောင်းပိုင်းတွင်လူကြီးဖို့ကြွက်ဦးနှောက်၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများတွင် presynaptic monoamine ပို့ဆောင်ရေး၏သိပ်သည်းဆအတွက်ခေတ်-ဆက်စပ်အပြောင်းအလဲများကို။ ဦးနှောက်သုတေသန။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဦးနှောက်သုတေသန။ 2000; 119 (2): 251-257 ။ [PubMed]
ဂူ DM, Lawler က CP, et al ။ လူ့ caudate နှင့် putamen အတွက် dopamine D1 အဲဒီ receptor ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း။ Neuropsychopharmacology ။ 1999; 21 (5): 641-649 ။ [PubMed]
Munafo MR, Bowes L ကို, et al ။ အမှုထိန်းချုပ်ရေးလေ့လာမှုများတစ် Meta-analysis သည်: အ COMT (Val158 / 108 Met) ဗီဇနှင့် schizophrenia များ၏အသင်းအဖွဲ့မရှိခြင်း။ Mol.Psychiatry ။ 2005; 10 (8): 765-770 ။ [PubMed]
Munafo MR, ဘရောင်းသည် SM, et al ။ serotonin Transporter (5-HTTLPR) genotype နှင့် amygdala ကို Activation: တစ် Meta-analysis သည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 63 (9): 852-857 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al နယ်လ်ဆင် EE, Leibenluft အီး။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏လူမှုရေး Re-orientation ကို: လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် psychopathology ရန်၎င်း၏စပ်လျဉ်းအပေါ်တစ်ဦးမှ neuroscience ရှုထောင့်။ Psychol Med ။ 2005; 35 (2): 163-174 ။ [PubMed]
Nemoda Z ကို, Szekely တစ်ဦးက, et al ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်လူကြီးအတွက် dopaminergic ဗီဇ polymorphic ၏ Psychopathological ရှုထောင့်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2011; 35 (8): 1665-1686 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Nikolova YS, Ferrell RE, et al ။ dopamine အချက်ပြဘို့ Multilocus မျိုးရိုးဗီဇပရိုဖိုင်းကို ventral striatum reactivity ကိုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Neuropsychopharmacology: Neuropsychopharmacology ရဲ့အမေရိကန်ကောလိပ်၏တာဝန်ရှိသူတဦးကထုတ်ဝေ။ 2011; 36 (9): 1940-1947 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ထို Y ကိုဒေါ် ND, et al ။ လုပ်သူများ dopamine: အခွင့်အလမ်းစရိတ်နှင့်တုန့်ပြန်သန်စွမ်း၏ထိန်းချုပ်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 2007; 191 (3): 507-520 ။ [PubMed]
Noble EP ။ စိတ်ရောဂါနှင့်အာရုံကြောချို့ယွင်းနှင့်၎င်း၏ phenotypes အတွက် DRD2 ဗီဇ။ Pharmacogenomics ။ 2000; 1 (3): 309-333 ။ [PubMed]
cortical dopamine ၏ O'Donnell P. ဆယ်ကျော်သက်ရင့်ကျက်။ Neurotoxicity သုတေသန။ 2010; 18 (3-4): 306-312 ။ [PubMed]
Okuyama Y ကို, Ishiguro H ကို, et al ။ စကားရပ်များနှင့် schizophrenia နဲ့ဆက်စပ် DRD4 ၏ကမကထဒေသတွင်း၌တစ်ဦးကမျိုးဗီဇ polymorphic ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျးမြားနှငျ့ဇီဝရူပဗေဒသုတေသနဆက်သွယ်ရေး။ 1999; 258 (2): 292-295 ။ [PubMed]
Padmanabhan အေ Developmental inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအခြေခံဦးနှောက် function ကိုအတွက်ပြောင်းလဲစေပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2011 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Paloyelis Y ကို, ထာ, MA, et al ။ attention- လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါအတွက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်း Striatal sensitivity ကို။ J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012; 51 (7): 722-732 ။ e729 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
pause တီပုံထုတ်ခြင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ရငျ့နှင့်သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ။ 2005;9(2): 60-68 ။ [PubMed]
pause T က, Keshavan M က, et al ။ အဘယ်ကြောင့်အများအပြားစိတ်ရောဂါမမှန်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပေါ်ထွက်လာသလဲ? နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2008;9(12): 947-957 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Pecina M က, ကို Mickey BJ, et al ။ DRD2 polymorphic အတွေ့အကြုံဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့, dopamine neurotransmission နှင့်ပွင့်လင်း modulate ။ cortex; အဆိုပါအာရုံကြောစနစ်၏လေ့လာမှုနှင့်အပြုအမူမှမြှုပ်နှံမယ့်ဂျာနယ်။ 2012 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al ဖာရ-Edgar K ကို Hardee je ။ DRD4 နှင့်ကလေးဘဝကိုအပြုအမူဆိုင်ရာတားစီးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်စိုးရိမ်စိတ်များအကြားက link များ striatal မော်ဂျူ။ လူမှုရေးသိမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2013 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Pfefferbaum တစ်ဦးက, Mathalon DH, et al ။ နို့စို့အရွယ်ကနေနှောင်းပိုင်းကလူကြီးမှဦးနှောက် shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲမှုများများ၏အရေအတွက်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Neurology ၏မော်ကွန်း။ 1994; 51 (9): 874-887 ။ [PubMed]
et al Philpot RM, Wecker L ကို။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းထပ်ခါတစ်လဲလဲအီသနောထိတွေ့ခြင်းဟာနျူကလိယကနေ dopaminergic output ကို၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်း septi accumbens ပွောငျးလဲ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမှ neuroscience အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်: Developmental အာရုံကြောသိပ္ပံများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Society ၏တရားဝင်ဂျာနယ်။ 2009; 27 (8): 805-815 ။ [PubMed]
et al Pijnenburg AJ, Honig WM ။ ကြွက်၏နျူကလိယ accumbens သို့ထိုးအောက်ပါ ergometrine နှင့်အခြား ergot အနကျအဓိပ်ပါယျ၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ။ မော်ကွန်း Internationale က de pharmacodynamie et de ကုထုံး။ 1976; 222 (1): 103-115 ။ [PubMed]
ထင်းရှူး DS ။ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်စိတ်ဓါတ်များမမှန်စတင်ခြင်း။ seminal Clin Neuropsychiatry ။ 2002;7(4): 223-233 ။ [PubMed]
Plomin R ကို, Haworth CM, et al ။ ဘုံမမှန်အရေအတွက်စရိုက်များဖြစ်ကြသည်။ သဘာဝတရားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ မျိုးရိုးဗီဇ။ 2009; 10 (12): 872-878 ။ [PubMed]
Pohjalainen T, Nagren K သည် et al ။ အဆိုပါ dopamine D2 အဲဒီ receptor 5'-နံရံမူကွဲ, -141C Ins / Del, Vivo အတွက်လျှော့ချ dopamine D2 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆနှင့်ဆက်စပ်ခြင်းမရှိပါ။ Pharmacogenetics ။ 1999;9(4): 505-509 ။ [PubMed]
Postuma RB, 126 positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့် functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်စာပေတစ် metaanalysis အပေါ်အခြေခံပြီး Dagher အေဘီစီစီအမျိုးအစား ganglia functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2006; 16 (10): 1508-1521 ။ [PubMed]
Rakic ​​P ကို, Bourgeois JP, et al ။ အဆိုပါမျောက်နှောက် cortex ၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများအတွက် synapses ၏တစ်ပြိုင်တည်းပါ overproduction ။ သိပ္ပံ။ 1986; 232 (4747): 232-235 ။ [PubMed]
Raznahan တစ်ဦးက, Greenstein: D, et al ။ Catechol-o-methyl transferase (COMT) val158met polymorphic နှင့်ဆယ်ကျော်သက် cortical ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကလေးဘဝ-စတင်ခြင်း schizophrenia နှင့်အတူလူနာအတွက်, သူတို့ရဲ့ Non-psychotic မောင်နှမများနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု။ Neuroimage ။ 2011; 57 (4): 1517-1523 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Robbins TW, Arnsten AF ။ နံရံပစ်ကစားနည်း-Executive function ကို၏ neuropsychopharmacology: monoaminergic မော်ဂျူ။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2009; 32: 267-287 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Romeo RD ။ အပျိုဖော်ဝင်စ: neurobehavioural ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်း၏စည်းရုံးရေးနှင့်လှုပ်ရှားမှုများသက်ရောက်မှုနှစ်ဦးစလုံး၏ကာလ။ J.Neuroendocrinol ။ 2003; 15 (12): 1185-1192 ။ [PubMed]
Rosenberg က DR, Lewis က DA ။ နှောင်းပိုင်းတွင် postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းမျောက် prefrontal cortex ၏ dopaminergic innervation အတွက်အပြောင်းအလဲများ: တစ် tyrosine hydroxylase immunohistochemical လေ့လာမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1994; 36 (4): 272-277 ။ [PubMed]
Rosenberg က DR, Lewis က DA ။ မျောက် prefrontal နှင့်မော်တာ cortical ရဲ့ dopaminergic innervation ၏ Postnatal ရငျ့: တစ် tyrosine hydroxylase immunohistochemical ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ နှိုင်းယှဉ် Neurology ၏ဂျာနယ်။ 1995; 358 (3): 383-400 ။ [PubMed]
Schoots အိုဗန် Tol နာရီ။ လူ့ dopamine D4 အဲဒီ receptor ထပ်ပာစကားရပ် modulate ။ အဆိုပါ pharmacogenomics ဂျာနယ်။ 2003;3(6): 343-348 ။ [PubMed]
Schultz dopamine အာရုံခံ၏ဒဗလျူခန့်မှန်းဆုလာဘ် signal ကို။ Neurophysiology ၏ဂျာနယ်။ 1998; 80 (1): 1-27 ။ [PubMed]
Schultz ဒဗလျူ dopamine နဲ့ဆုလာဘ်နှင့်အတူတရားဝင်ရယူခြင်း။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2002; 36 (2): 241-263 ။ [PubMed]
Seaman JK, Durstewitz: D, et al ။ excitatory Synaptic သွင်းအားစု၏ Dopamine D1 / D5 အဲဒီ receptor မော်ဂျူ V ကို prefrontal cortex အာရုံခံ layer အား။ Proc.Natl.Acad.Sci.USA 2001; 98 (1): 301-306 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Seaman JK, ယန် CR ။ အဆိုပါ prefrontal cortex အတွက် dopamine မော်ဂျူ၏ကျောင်းအုပ်ကြီး features နဲ့ယန္တရားများ။ prog Neurobiol ။ 2004; 74 (1): 1-58 ။ [PubMed]
Seeger, G, Schloss P ကို, et al ။ hyperkinetic disorder- အတွက် methylphenidate နှင့်အတူကုသမှုလက်တွေ့တုံ့ပြန်မှုကိုခန့်မှန်းအတွက်အမှတ်အသားမျိုးဗီဇ polymorphic? Neurosci လက်တ 2001; 313 (1-2): 45-48 ။ [PubMed]
Seeman P ကို, Bzowej နယူးဟမ်းရှား, et al ။ ကလေးများနှင့်အိုမင်းလူကြီးများအတွက်လူ့ဦးနှောက် dopamine receptors ။ synapses ။ 1987; 1 (5): 399-404 ။ [PubMed]
Shaw P ကို, Gornick M က, et al ။ အာရုံစူးစိုက်မှု-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါအတွက် dopamine D4 အဲဒီ receptor ၏ polymorphic, လက်တွေ့ရလဒ်ကိုနှင့် cortical ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ Arch.Gen.Psychiatry ။ 2007; 64 (8): 921-931 ။ [PubMed]
et al Shram MJ, Funk: D ။ Periadolescent နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်နီကိုတင်း၏အကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုတိုင်းတာစစ်ဆေးမှုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားတုံ့ပြန်ကြသည်။ Psychopharmacology (Berl) 2006; 186 (2): 201-208 ။ [PubMed]
Sisk CL, Zehr JL ။ Pubertal ဟော်မုန်းဟာဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူစည်းရုံး။ တပ်ဦး Neuroendocrinol ။ 2005; 26 (3-4): 163-174 ။ [PubMed]
လှံကို LP ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်အသက်အရွယ်-related အပြုအမူသရုပ်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2000; 24 (4): 417-463 ။ [PubMed]
လှံ LP ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အပေါ်အရက်၏သက်ရောက်မှု။ အရက်သုတေသနနှင့်ကျန်းမာရေး - အရက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်အရက်သောက်ခြင်းဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျု၏ဂျာနယ်။ 2002; 26 (4): 287-291 ။ [PubMed]
လှံကို LP ။ ဆုလာဘ်များ, ဆန္ဒရှိနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေ: ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်အအနှံ့ထွန်းသစ်စ convergence နှင့်လူ့ဒေတာ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2011; 1 (4): 392-400 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
လှံကို LP သို့ဘရိတ် SC ။ Periadolescence: အသက်အရွယ်-မှီခိုအပြုအမူများနှင့်ကြွက်များအတွက် psychopharmacological Response ။ dev Psychobiol ။ 1983; 16 (2): 83-109 ။ [PubMed]
et al လှံကို LP သို့ Shalaby IA, ။ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်း haloperidol ၏နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေး: အမူအကျင့်များနှင့် psychopharmacological ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 1980; 70 (1): 47-58 ။ [PubMed]
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်တာ Steinberg အယ်လ်အန္တရာယ်: အဘယျသို့အပြောင်းအလဲ, ဘာကွောငျ့လဲ? အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2004; 1021: 51-58 ။ [PubMed]
Steinberg L ကို, Cauffman အီး, et al ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်သူများထက်ရင့်ကျက်မှုလျော့နည်းသလား။ အရွယ်မရောက်သေးသူများသည်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း၊ လူငယ်ပြစ်ဒဏ်နှင့် APA ၏“ လတ်တလောဖိနပ်များ” ရရှိခြင်းကိုရရှိသည်။ Am Psychol ။ 2009; 64 (7): 583-594 ။ [PubMed]
Stelzel ကို C, Basten ဦး, et al ။ အလုပ်တခုကို switching အတွက် Frontostriatal ပါဝင်ပတ်သက်မှု d2 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆအတွက်မျိုးဗီဇကွဲပြားမှုအပေါ်မူတည်ပါသည်။ neuroscience ၏ဂျာနယ်: အာရုံကြောသိပ္ပံများအတွက် Society ၏တရားဝင်ဂျာနယ်။ 2010; 30 (42): 14205-14212 ။ [PubMed]
et al Stevens MC, Pearlson GD ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကနေလူကြီးမှငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ်အာရုံကြောကွန်ရက်များအပြန်အလှန်အတွက်အပြောင်းအလဲများ။ လူ့ဦးနှောက်ပုံထုတ်ခြင်း။ 2009; 30 (8): 2356-2366 ။ [PubMed]
Stice အီးလူသားများအတွက် dopaminergic ဆုလာဘ်အတွက် Dagher အေမျိုးဗီဇမူကွဲ။ ဖိုရမ် Nutr ။ 2010; 63: 176-185 ။ [PubMed]
et al Stice အီး, Spoor S က။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်အစားအစာမှတုံး striatal တုံ့ပြန်မှုအကြားဆက်ဆံရေး TaqIA A1 allele အားဖြင့်တည်းဖြတ်သည်။ သိပ္ပံ။ 2008; 322 (5900): 449-452 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Stice အီး, Yokum S က။ အစားအစာမှဆုလာဘ် circuitry Response ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုအတွက်အနာဂတ်တိုးဟောကိန်းထုတ်: DRD2 နှင့် DRD4 ၏စိစစ်ဆိုးကျိုးများ။ Neuroimage ။ 2010; 50 (4): 1618-1625 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Stice အီး, Yokum S က။ dopamine အချက်ပြစွမ်းရည်ထင်ဟပ် Multilocus မျိုးဗီဇပေါင်းစပ်ဆုလာဘ် circuitry Response ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ neuroscience ၏ဂျာနယ်: အာရုံကြောသိပ္ပံများအတွက် Society ၏တရားဝင်ဂျာနယ်။ 2012; 32 (29): 10093-10100 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Sturman DA, Moghaddam ခမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ neurobiology: ဦးနှောက်ဗိသုကာအတွက်အပြောင်းအလဲအလုပ်လုပ်တဲ့ဒိုင်းနမစ်နှင့်အမူအကျင့်လိုတဲ့သဘောထားကို။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2011; 35 (8): 1704-1712 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Tarazi FI, Tomasini EC, et al ။ ကြွက် caudate-putamen နှင့်နျူကလိယအတွက် dopamine နှင့် serotonin ပို့ဆောင်ရေး Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ septi accumbens ။ neuroscience လက်တ။ 1998; 254 (1): 21-24 ။ [PubMed]
Teicher MH, Andersen က SL, et al ။ striatum အတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအကြား dopamine အဲဒီ receptor တံစဉ်များကိုအဘို့သက်သေအထောက်အထားသော်လည်းမနျူကလိယ accumbens ။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1995; 89 (2): 167-172 ။ [PubMed]
Teicher MH, ဘာဘာ ni, et al ။ စူးရှသော nigrostriatal နှင့် haloperidol မှ mesocorticolimbic စနစ်ကတုံ့ပြန်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု။ Neuropsychopharmacology ။ 1993;9(2): 147-156 ။ [PubMed]
Tekin S က, Cummings က JL ။ တိုကျရိုကျ-subcortical အာရုံခံဆားကစ်များနှင့်လက်တွေ့ neuropsychiatry: update တစ်ခု။ Psychosomatic သုတေသနဂျာနယ်။ 2002; 53 (2): 647-654 ။ [PubMed]
Thirion B, Pinel P ကို, et al ။ ကြီးမားတဲ့ fMRI ဆောင်များတွင်၏ analysis: စာရင်းအင်းနှင့်အတိုင်းအတာများဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအုပ်စုလေ့လာဆန်းစစ်။ Neuroimage ။ 2007; 35 (1): 105-120 ။ [PubMed]
et al Thomason ME, Dougherty RF ။ COMT genotype ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင် prefrontal အဖြူကိစ္စလမ်းကြောင်းသက်ရောက်သည်။ Neuroimage ။ 2010; 53 (3): 926-934 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al Thomason ME, Waugh အီး။ COMT genotype နှင့်ကလေးများအတွက်ဦးနှောက် perfusion အနားယူ။ Neuroimage ။ 2009; 48 (1): 217-222 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Tseng KY, O'Donnell P. Dopamine modulation မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာ prefrontal cortical interneurons ပြောင်းလဲခြင်း။ Cereb Cortex ။ 2007; 17 (5): 1235-1240 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Tunbridge EM ။ အဆိုပါ catechol-o-methyltransferase ဗီဇက၎င်း၏စည်းမျဉ်းများနှင့် polymorphic ။ Int.Rev.Neurobiol ။ 2010; 95: 7-27 ။ [PubMed]
et al Tura အီး, Turner ဂျာ။ Multivariate schizophrenia အတွက် neurocircuitry အပေါ်မျိုးရိုးဗီဇသက်ရောက်မှုအကြံပြုလေ့လာဆန်းစစ်။ Neuroreport ။ 2008; 19 (6): 603-607 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al ဗန်က de Giessen EM, က de ဝင်းဟာ MM ။ အဆိုပါ dopamine Transporter ဗီဇ SLC6A3 အတွက် polymorphic နှင့်ဆက်စပ် Striatal dopamine Transporter ရရှိနိုင်မှု။ J.Nucl.Med ။ 2009; 50 (1): 45-52 ။ [PubMed]
et al ဗန် der Schaaf ME, ဗန် Schouwenburg MR ။ ဆုကြေးနှင့်အပြစ်ဒဏ်ပြောင်းပြန်သင်ယူစဉ်အတွင်းလူ့ Striatal နေရင်မြန်အောင်၏ Dopamine မှီခိုမှုအထူထောင်။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2012 [PubMed]
et al ဗန် Leijenhorst L ကို, Moore BG ။ ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချ: ဆုလာဘ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုဒေသ Neurocognitive ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ Neuroimage ။ 2010 [PubMed]
et al Vandenbergh DJ သမား, Persico လေး။ လူ့ dopamine Transporter ဗီဇ (DAT1) ခရိုမိုဆုန်း 5p15.3 မှမြေပုံနှင့်တစ်ဦး VNTR ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Genomics ။ 1992; 14 (4): 1104-1106 ။ [PubMed]
VanNess SH, Owen MJ, et al ။ တွဲဖက်၏ variable ကိုအရေအတွက်အား DAT1 အတွက်ဒြပ်စင်စသည်တို့ dopamine Transporter သိပ်သည်းဆအတွက်ထိန်းညှိ repeat ။ BMC မျိုးရိုးဗီဇ။ 2005; 6: 55 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Varlinskaya EI, လှံ LP ။ ထပ်ခါတလဲလဲအီသနောထိတွေ့ပြီးနောက်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Sprague-Dawley ကြွက်များတွင်အီသနော၏လူမှုရေး anxiolytic သက်ရောက်မှုထိခိုက်မခံတဲ့။ အရက်။ 2010; 44 (1): 99-110 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wahlstrom: D, Collins P ကို, et al ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် dopamine neurotransmission အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို: အကဲဖြတ်အတွက်အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုများနှင့်ပြဿနာများကို။ ဦးနှောက် Cogn ။ 2010; 72 (1): 146-159 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wahlstrom: D, White က T, et al ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာ dopamine system လုပ်ဆောင်မှုပြောင်းလဲမှုအတွက် Neurobehavioral အထောက်အထား။ အာရုံကြောသိပ္ပံ & ဇီဝအမူအကျင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 2010; 34 (5): 631-648 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Walters က JT, Owen MJ ။ စိတ်ရောဂါမျိုးရိုးဗီဇအတွက် Endophenotypes ။ Molecular Psychiatry ။ 2007; 12 (10): 886-890 ။ [PubMed]
et al Weickert CS, Webster MJ ။ လူ့ prefrontal cortex အတွက် dopaminergic အမှတ်အသားများအတွက် Postnatal ပွောငျးလဲ။ neuroscience ။ 2007; 144 (3): 1109-1119 ။ [PubMed]
ဝီလျံ LM, Gatt JM ။ စိတ်ခံစားမှု၊ အတွေးအမြင်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုစည်းမျဉ်းများပေါင်းစပ်ထားသောပုံစံ - အိုမင်းခြင်း၏ဝိရောဓိကိုအသုံးချခြင်း။ ဘက်ပေါင်းစုံအာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2008;7(3): 367-404 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ Dopamine, သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2004;5(6): 483-494 ။ [PubMed]
Yacubian J ကို, Sommer T က, et al ။ အာရုံကြောဆုလာဘ် sensitivity ကိုနဲ့ဆက်စပ်ဗီဇ-ဗီဇအပြန်အလှန်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2007; 104 (19): 8125-8130 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Yakovlev PI, Lecours AR ။ အစောပိုင်းဘဝအတွက်ဦးနှောက်၏ဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး။ A. အ Minkowski ။ အောက်စဖို့ဒ: ဘလက်ဝဲလ်သိပ္ပံ; 1967 ။ ဦးနှောက်၏ဒေသဆိုင်ရာရငျ့၏ myelogenetic သံသရာ; စစ။ 3-70 ။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း Yurgelun-Todd ဃစိတ်ခံစားမှုနှင့်သိမြင်မှုအပြောင်းအလဲများကို။ Curr Opin Neurobiol ။ 2007; 17 (2): 251-257 ။ [PubMed]
et al Zald DH, Cowan RL ။ Midbrain dopamine အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုပြောင်းပြန်လူသားတွေအတွက်အသစ်အဆန်း-ရှာစရိုက်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ neuroscience ၏ဂျာနယ်: အာရုံကြောသိပ္ပံများအတွက် Society ၏တရားဝင်ဂျာနယ်။ 2008; 28 (53): 14372-14378 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Zhang က Y ကို, Bertolino တစ်ဦးက, et al ။ လူ့ dopamine D2 receptor မျိုးရိုးဗီဇအတွက် polymorphic အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်စဉ်အတွင်းဗီဇစကားရပ်, splicing နှင့်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ Proc.Natl.Acad.Sci.USA 2007; 104 (51): 20552-20557 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]